“တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏အံ့ဖွယ် မေ့ရာဂ်ျ ခရီး” အကြောင်း သိကောင်း စ ရာ | Burma Muslim
“တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏အံ့ဖွယ် မေ့ရာဂ်ျ ခရီး” အကြောင်း သိကောင်း စ ရာ
By burmamuslim on June 1, 2014	တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ အံ့ဖွယ် မေ့ရာဂ်ျ ခရီး
ရဂျဗ်လ ၂၇ ည သည် မေ့ရာဂ်ျ ည ဖြစ်သည်။ ၄င်း ညမြတ်၏ ထူးမြတ်ခြင်း အကြောင်းနှင့် အရေးကြီးသော အိဗါဒသ်များကို အသင် သိပါသလား၊ မွတ်စ်လင် တစ်ယောက်အနေဖြင့် ၄င်းတို့ကို သိရန် အရေးကြီးသလို အခြားမွတ်စ်လင်များကိုလည်း ပြန်လည်သင်ကြားပြောကြားပေးရန် အသင့်တာဝန်ဖြစ်သည်။
မေ့ရာဂ်ျ ခရီးဟု ကြားသည်နှင့် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) မိုးကောင်းကင်သို့ ခရီးထွက်သည့်အကြောင်းကို မိမိတို့ သတိရမိပါသည်။ သို့သော် မြောက်များစွာသော မွတ်စ်လင်တို့သည် ၄င်းအဖြစ် အပျက် အကြောင်းကို တိတိကျကျ မသိရှိကြသည့်အတွက် သံသယရှိသူများစွာ ရှိသလို လုံးဝမယုံကြည်သူများလည်း ရှိကြသည် ကို တွေ့ရသည်။ အမှန်မှာ မေ့ရာဂ်ျ ခရီးအကြောင်း စူရာ ၁၇း၁ တွင် လေ့လာနိုင်သလို ၄င်းအဖြစ်အပျက် ကို မွတ်စ်လင်မ်တိုင်း ကုရ်အာန်အပေါ်သံသယမရှိသူတိုင်း ယုံကြည်ကြပါကြောင်း ပြောစရာမလိုပါ။ သို့သော် ဒအ်ဝဟ် လုပ်ငန်းတစ်ရပ် လုပ် ကိုင်နေကြသူများ ပညာရှာဖွေနေကြသူများအတွက် ပညာသင်ပေး လိုချင်သူများအတွက် မှန်ကန်သော ဒီးန်သာသနာကို လိုက်စားလိုကြသူများအတွက် ဤအကြောင်းအရာသည် မဖြစ်မနေ ဂဂနန သိရှိနားလည် ထိုက်သော အကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ဖြစ်သည် ဟု ယုံကြည်သဖြင့် မေ့ရာဂ်ျခရီးစဉ်အကြောင်းကို ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါသည်။
အိဗ်နိကသီးရ်၏ “အန်နီဟာယ ၀လ်ဗီဒါယ စာအုပ် စာမျက်နှာ ၁၀၈” တွင် မိရာဂ်ျ ခရီးစဉ်၏ အချိန်ကာလကို ပညာရှင် အသီးသီးက အမျိုးမျိုး ကွဲခြားကာဖေါ်ပြခဲ့ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။ တစ်ချို့က ဟိဂ်ျရသ်ပြုလုပ်ပြီး ၁၃ လအကြာ၊ အချို့က ၁၆ လအကြာ၊ အချို့က ၁၇ လအကြာဟု ဖေါ်ပြခဲ့ကြ ကြောင်း ရေးသားတင်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၄င်း မိရာဂ်ျ ခရီးစဉ်ကို ဆွာဟာ ဘာပေါင်း ၅၄ ဦးက တင်ပြ ခဲ့ကြောင်း သိရပြီး ၄င်းတို့အတွင်း မုဟာဂျိရ် ဆွဟာဘာများအနက် အဓိက တင်ပြခဲ့သည့် ဆွဟာဘာ သည် အဘူဇရ် ဂဖ်ဖါရီ (ရ) ဖြစ်ပြီး အခြားတင်ပြသူ ဆွဟာဘီများအနက် အနက်စ်၊ အဘူဟူရိုင်ရာ၊ အဗ်ဒွလ္လာ အိဗ်နိ မစ်အူးဒ်၊ အဗ်ဒွလ္လာဟ်အိဗ်နိ အဗ်ဗါစ်နှင့် ဂျာဗိရ်ဆင် အဗ်ဒွလ္လာဟ် (ရ) တို့ဖြစ်ပြီး အန်ဆွာရ် ဆွဟာဘာများအနက် မလိက် အိဗိနိ ဆာဆ (ရ) နှင့် အခြားဆွဟာဘာများဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိပ်ကို ဆဟာဆိသ်သာ ကျမ်းကြီး ၆ ကျမ်းလုံးတွင် လေ့လာနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဘူခါရီကျမ်းနှင့် မွတ်စ်လင်မ် ကျမ်းကို ကိုးကားကာ ရေးသားဖေါ်ပြပါမည်။
အကြင်အရှင်မြတ်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူ၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် တစ်ညဉ့်၌ မိမိကျွန် (နဗီ တမန်တော် မုဟမ်္မဒ်)အား““မတ်စ်ဂျစ်ဒ်ဒေဟရာမ်”” ထူးမြတ်သော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် မှ ထိုကျွန် (နဗီ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်)အား မိမိ၏ အချို့သက်သေ လက္ခဏာတော်များကို ပြသတော်မူအံ့သောငှာ အကြင် ““မတ်စ်ဂျစ်ဒ်ဒေ အတ်က်ဆွာ”(အလွန်ဝေးလံလှသော) ဗလီ ၀တ်ကျောင်းတော် သို့ ခေါ်ဆောင်၍ သွားခဲ့ တော်မူ၏။ ငါအရှင်မြတ် သည် ထိုဗလီဝတ်ကျောင်းတော်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဗရ်ကတ်သုခ ချမ်းသာ မင်္ဂလာ နှင့် ပြည့်စေတော်မူခဲ့၏။ ဧကန်မလွဲ ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင်လျှင် အကြွင်းမဲ့ကြားတော်မူသောအရှင်၊ အကြွင်း မဲ့ ခွဲခြားသိမြင်တော်မူသော အရှင်၊ ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။ (၀၁၇း၀၁)
မက္ကာမြို့တော်တွင် ကိုရိုင်ရှ် ကာဖိရ် တို့၏ လက်လွန်ဖွယ် ရက်စက်မှုများသည် ပြင်းသည်ထက် ပြင်းထန် နေချိန်တွင် အကြီးမားဆုံးသော ဆုံးရှုံးမှုမျာကို တမန်တော်မြတ်သည် ခါးစီးခဲ့ပါသည်။ ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် ကောင်းသော ရက်များကို ခက်ခဲကြီးစွာ ဖြတ်သန်းရင်း အချိန်အတော်ကြီး ရှိခဲ့လေပြီး။ မကြာခင်သော ကာလများအတွင်း ဇနီးတော် ခတီဂျာ သခင်မနှင့် ဦးရီးတော် အဘူသွာလိဗ် တို့ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် တမန်တော်မြတ် (ဆွ)အတွက် အလွန်အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦးဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်ကို အဖက်ဖက်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သူ ပန့်ပိုးသူများဖြစ်သည်။ သွာအိဖ်မြို့ ခရီးစဉ် သည်လည်း တမန်တော်မြတ်အတွက် အလွန်ပင် စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရရှိခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။
အချိန်ကိုကြည့်လျှင် နဗူဝသ် သက် ၁၀ ကျော်ရနေပြီး တမန်တော်မြတ် (ဆွ)၏ သက်တော်မှာလည်း ၅၀ ခန့်ရှိပြီ၊ တမန်တော်အဖြစ် ၁၀ နှစ် တိုင်တိုင် ဒအ်ဝဟ် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက် နေဆဲဖြစ်သည်။ ဟိဂ်ျရသ် ခရီး မစတင်မီ ၃ နှစ်အလို ရဂျဗ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ညဖက် အချိန်တွင် ကောင်းကင်တမန် ဂျီဗရာ အိလ် (အ) က ရုတ်တရက် ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော်တွင် အိပ်ပျော်နေသော တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ထံရောက်လာကာ နှိုးလိုက်ပြီး သွဝါဖ်ပြုရန်ပြောလေသည်။ ဆက်လက်ပြောသည်မှာ ““ အလ္လာဟ်အရှင် မြတ်၏ အမိန့်တော်ရှိသည်၊ အသင်သည် ဒီညတွင် မစ်ဂျိဒ် အက်စ်စွဟ် သို့သွားရောက်ရမည်၊ ထို့နောက် မိုးကောင်းကင်ခရီး တက် ရောက်ရန် အတွက် ပြင်ဆင်ပေတော့”” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဂျီဗရာအီလ် (အ) ကောင်းကင်တမန်နှင့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) တို့သည် “ဘိုရာက်” ကို စီးနင်းကြရင်း ပါလက်စ်တိုင်းတို့ဋ္ဌာနေ ဂျေရုစလင်မြို့ရှိ မစ်ဂျိဒ် အက်စ်စာ ၀တ်ကျောင်းတော်သို့ သွားနေကြပေသည်။ လမ်းရီးတွင် ခရီးသွားတစ်စုသည် လမ်းပျောက်နေရင်း သောက်စရာရေပင်မရှိ ဒုက္ခရောက်နေသည်ကို တွေ့ရသည့် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည် ၄င်းတို့ကို လမ်းညွှန်ပြ သပြီး သောက်စရာရေပင် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ မစ်ဂျိဒ် အက်စ်စာ၏ ဒုတိယ ပရ၀ုန်တွင် ရောက်ရှိလာသည့် တမန်တော်မြတ်နှင့် ဂျီဗရီလ် (အ) သည် ၀တ်ကျောင်းတော်တွင် ခြေချစရာ မရှိအောင် များပြားလွန်းသည့် လူအုပ်စုကြီးကို တွေ့ရလေသည်။ သူတို့သည် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) အားစောင့်မျှော် နေကြသည့်သူတို့ဖြစ်ပေသည်။ ဂျိဗရာအိလ် (အ) က ““၄င်းတို့သည် အသင့်ခေတ် အရင် ရှေးရှေးက ပွင့်လေပြီးသမျှသော တမန်တော် အပေါင်းဖြစ်သည်၊ အသင့်အား ခရီးဦးကြိုရန်အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်၊ အသင် သည် ၄င်းတို့အား ဦးဆောင်ကာ ဆွလာသ် ၂ ရကအသ် ဖတ်ရန် ပြင်ဆင်ပါ”” ဟုပြောလေသည်။ တမန်တော် မြတ်သည် အလွန်ပင် ၀မ်းသာပြီး အားလုံးနှင့်တွေ့ဆုံနုတ်ဆက်ကာ ဆွလာသ် ၂ ရကအသ်ကို အီမာမ်အဖြစ် ဦးဆောင်ကာ ဖတ်လေသည်။
ရှားဝလီယွလ္လာဟ် သခင်ကြီး ရေးသားခဲ့သည့် “စီရသွန်နဗီ ဟိဂ်ျဂျသွလ္လာဟိ ဗလာဂ် စာမျက်နှာ ၄၅၁” တွင် ရေးသားသည်မှာ၊ ဆွလာသ်အပြီး ဂျီဗရာအီလ် (အ) သည် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) အား နို့ တစ်ခွက် နှင့် ၀ိုင်အရက် တစ်ခွက်ကို ဆက်သလိုက်သည်။ တမန်တော်မြတ်သည် နို့ကို ရွေးချယ်ကာ သောက်သုံးလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဂျီဗရီလ် (အ) က မိန့်သည်မှာ “အိုတမန်တော် အသင်၏ နို့ကိုရွေး ချယ်မှုသည် အမှန်ပင်ဖြစ်သည်၊ နို့ခွက်ကိုရွေးချယ်မှုသည် အသင်၏ အွမ္မသ်အတွက် ဟိဒါယသ်၏ သဘော ရရှိမှုကို ဖေါ်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊ ၀ိုင်အရက်ခွက်ကို မသုံးစွဲခြင်း သည် အသင်၏ အွမ္မသ် အတွက် အပယ်လမ်းသို့ ရောက်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်မှုကို ရရှိသွားခြင်း”” ဟု ရှင်းပြပါသည်။
ထို့နောက် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် မိုးကောင်းကင်ခရီးကို ဆက်လက်ကြွမြန်းခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ဘုံ ၏အထပ်တိုင်းတွင် အစောင့်ကောင်းကင်တမန်များကို တွေ့ရလေသည်။ ထိုတမန် များ သည် မိမိတို့၏ အဆင့်သို့ရောက်လာသည့် ဂျီဗရာအီးလ် (အ) အား မေးခွန်းမေးလေ့ရှိသည်မှာ ““ အိုလာရောက်သူသည် မည်သူနည်း၊ ဂျီဗရာအီးလ် ဟု ဖြေလျှင် အသင်နှင့်အတူ လာသူမှာ မည်သူနည်းဟု မေးလေသည်၊ မုဟမ္မဒ် ဟုဖြေလျှင်၊ ၄င်းကို အထက်မှ ခေါ်ဆောင်လာရန် အမိန့်တော်ရှိပါသလားဟု ထပ်မေးပါသည်၊ ရှိပါသည်ဟု အဖြေရရှိမှသာ ကောင်း ကင်တံခါးသည် ပွင့်လေသည်။ ဤ အဖြစ်အပျက်သည် ကောင်းကင်အထပ်တိုင်း တွင် ကြုံတွေ့ရလေသည်။
တမန်တော် အာဒမ် (အ) ကို တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ကတွေ့မြင်သောအခါ အာဒမ်သခင်သည် ညာဖက်ကို ကြည့်လိုက်လျှင် ပြုံးရယ်လျှက် ဘယ်ဘက်ကို ကြည့်လျှင် ငိုလျှက် ရှိသည်ကို တွေ့ သည်အခါ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) က ဂျီဘရီးလ် (အ) အား ဤအဖြစ်ကိုမေးကြည့်ရာ ဂျီဘရီးလ် (အ) ကမိန့်သည်မှာ ““အာဒမ် (အ) သည် ညာဖက်နှင့် ဘယ်ဘက်တွင် မိမိ၏ သားသမီးများ ကို မြင်တွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ညာဖက်တွင် ရှိသူတို့ သည် ဂျန္နသ် ဥယျဉ် သို့ ၀င်ရောက်မည့်သူများဖြစ်သဖြင့် သူတို့ကို မြင်လျှင် အာဒမ် (အ) ပျော်ရွှင်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး ဘယ်ဘက်မှသူတို့ သည် ဂျဟန္နမ် ငရဲစခန်းသို့ ၀င်ရောက်မည့်သူများဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ကို မြင်လျှင် အာဒမ် (အ) သည် စိတ်မကောင်းသဖြင့် ငိုကျွေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီတော့ မိမိတို့သည် မည်သည့်ဖက် တွင် ရောက်မည်ကို မည်သူ သိနိုင်မည်နည်း။ အမှန်တော့ မိမိတို့သည် ညာဖက် နေသူများ၏ စာရင်းတွင် ပါဝင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းရမည်။
ကောင်းကင်ဘုံ၏ ဒုတိယအဆင့်သို့ရောက်သည့်အခါ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် တမန်တော် အီစာ (အ) နှင့် တမန်တော် ယဟ်ယာ (အ) တို့ကို တွေ့မြင်ရပြီး သူတို့က တမန်တော်မြတ် အား ခရီးဦးကြိုကြကာ တမန်တော် မြတ် (ဆွ) ၏ ကောင်းကျိုးအဖြာဖြာအတွက် ဆုမွန်တောင်းကြလေသည်။
ကောင်းကင်ဘုံ၏ သတ္တမအဆင့်သို့ရောက်သည့်အခါ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် တမန်တော် အီဗရာဟင်မ် (အ) ကို တွေ့မြင်ရပြီး သူက တမန်တော်မြတ်အား ခရီးဦးကြိုကြကာ တမန်တော် မြတ် (ဆွ) ၏ ကောင်းကျိုးအဖြာဖြာ အတွက် ဆုမွန်တောင်းလေသည်။ တမန်တော် အီဗရာဟင်မ် (အ) ကမူ ဘိုင်သွလ် မာမူးရ် ခေါ် မိုးကောင်းကင် ခုနှစ်ထပ်ရှိ ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော်ကို မှီလျှက် အနားယူတော် မူနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) က ဂျီဘရီးလ် (အ) အား အဖြစ်ကိုမေးကြည့်ရာ ဂျီဘရီးလ် (အ) ကပြောပြသည်မှာ တမန်တော် အီဗရာဟင်မ် (အ) ၏ ထူးမြတ်မှုနှင့် ကြိုးပမ်းမှုများတွင် မြေပြင်ပေါ်ရှိ ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော်သည် သက်သေခံဖြစ်ပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ၄င်းကြိုးပမ်း မှုကို လက်ခံတော်မူသည့်အတွက် မိုးကောင်းကင်၏ ကောင်းကင်တမန်များ သွဝါဖ် ပြုလုပ်သည့် ဘိုင်သွလ် မာမူးရ်တွင် နေထိုင်ခွင့်ကို ပေးအပ်ချီးမြင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်း ဘိုင်သွလ် မာမူးရ်တွင် တစ်နေ့လျှင် ကောင်းကင်တမန် ၇ သောင်း သွဝါဖ်ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး တစ်သက်တာတွင် သူတို့သည် တစ်ခေါက်သာ သွဝါဖ် လုပ်ခွင့်ရပြီး၊ အကြောင်းမှာ နောက်ရောက်ရောက် လာ မည့် ကောင်းကင်တမန်များကြောင့် သွဝါဖ် လုပ်ပြီးသူ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် နောက်ကို မည်သည့်အခါမျှ သွဝါဖ်လုပ်ရန် အခွင့်အရေး မရနိုင်တော့ခြင်းဖြစ်ပါ သည်ဟု ဂျီဗရာအီးလ် (အ) က ရှင်းပြပါသည်။
တမန်တော်ပေါင်း ၁၂၄၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် အဆိုပါ တမန်တော် ရ ပါးကို ရွေးချယ်ကာ မိုးကောင်းကင် အထပ်ထပ်တိုင်းတွင် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ပေးအပ်ခြင်းသည် လည်း အိက်မသ် ခေါ် တွေးတော်စရာနှင့် ဝေးမည့်သဘော မရှိပါ။ အကြောင်းရင်းခံရှိပေသည်။ သဘောမှာ တမန်တော် အာဒမ်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရခြင်းသည် သူ၏ သားသမီးများ ကို မြင်တွေ့ ခွင့်ရခြင်းသည် တမန်တော်မြတ်အား လူသားထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရခြင်း တနည်းအားဖြင့် လူသားထု၏ စုစည်းမှု၊ ထို့အပြင် အကောင်းနှင့် အဆိုး၊ ဒွန်တွဲနေမှု၊ ကောင်းမှုနှင့် မကောင်းမှု၏ သဘောတရား၊ ၄င်း ကောင်းမှုနှင့် မကောင်းမှု လုပ်ကြသူတို့၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့တရားခွင့်နောက်ပိုင်း ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရမည့် အပယ်ငရဲစခန်း အကြောင်းနှင့် ကောင်းကင်ဘုံ သုခဥယျဉ် တို့အကြောင်းကို သိခွင့်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လူသားတို့၏ ဖခင်ကြီး အာဒမ် (အ) ၏ မေတ္တာတရားရှိပုံ သားသမီးအားလုံးကို မည်မျှ ချစ်ခင်နှစ်သက်ပုံ ဖခင်တစ်ဦး၏ စေတနာ မေတ္တာတရားထားတတ်ပုံကို သိခွင့်ရရှိပါသည်။
ထို့အပြင် အခြားတမန်တော်အပေါင်းတို့အနက် တမန်တော် အီဗရာဟင်မ် (အ)၊ တမန်တော် မူစာ (အ)၊ တမန်တော် ဟာရွန်း (အ)၊ တမန်တော် ယူစွဖ် (အ)၊ တမန်တော် အီစာ (အ) နှင့် တမန်တော် ယဟ်ယာ (အ) တို့ကို ရွေးချယ်ပေးတွေ့ခဲ့သည်မှာလည်း အလွန် တရားရးစရာကောင်းပါသည်။ သဘောမှာ တမန်တော်မြတ် အနေဖြင့် အဆိုပါ တမန်တော်အပါင်းတို့၏ အတွေ့ အကြုံ များကို လေ့လာပြီး ၄င်းတို့ ဘ၀တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို သင်္ခန်းစာယူကာ မိမိဘ၀နှင့် မိမိအွမ္မသ်အတွက် ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် သတိပေးခြင်း လည်း ဖြစ်သည်ဟု ပညာရှင်များက တင်ပြကြသည်ကိုလည်း လေ့လာ သိရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့နောက် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) အား ဂျီဗရာအီးလ် (အ) က မိုးကောင်းကင် ခုနှစ်ထပ်မှ ဆက်လက် ခေါ်ဆောင်သွားရာ (ဆိဒ်ရသွလ် မွန်သဟာဟ်) ဇီးပင်များ ပေါက်ရောက်နေသည့်နေရာ တစ်နေရာ အရောက်တွင် ရပ်ပစ်လိုက်ပြီး ဂျီဗရာအီးလ် (အ) က အို တမန်တော် မိမိသည် ဤနေရာမှ ရှေ့သို့ ဆက်လက်သွားရန် အမိန့်တော် မရှိတော့ပြီး အသင်တစ်ယောက်တည်းသာ ဆက်လက်သွားရောက်ရ မည်ဟု ဆိုပါသည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ဆက်လက်သွားရောက်သည့်အခါ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အရရှ် ပုလ္လင်တော်တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကို ဖူးမြော်တော် မူခွင့် ရရှိပါသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို တွေ့သည့်အခါ “ အို ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခြင်း ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းဖြင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုး ၏ ပြလုပ်သမျှ အမလ်အိဗါဒသ်အားလုံးသည် အရှင်မြတ်၏ နှစ်သက်မှုအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ Attahiyatu Lillahi Wassalawatu Wattayibatu။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ထိုအခါ မိမိ၏ အွမ္မသ်ကို မမေ့ဘဲ “ အိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ၄င်း မင်္ဂလာ ကောင်းချီးသည် ကျွန်ုပ်၏ အွမ္မသ်သား လူသူတော်ကောင်းများအတွက်လည်း ကျရောက်စေခွင့် ပြုတော်မူ ပါ အရှင်မြတ်” ဟု ပြန်လည်ပြောကြားလေသည်။ Assalamualaina Waala Ibadullahi Assaliheen ။
ထိုအခါ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ပြောကြားသည်မှာ အို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုး သက်သေခံသည် မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှ တစ်ပါး အခြား ခ၀တ်ကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင် မရှိဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တမန်တော်မြတ်အား လက်ဆောင်အဖြစ် ဆွလာသ် ပေါင်း တစ်နေ့လျှင် အကြိမ် ၅၀ ဖတ်ရန် မိန့်မှာလေသည်။ တမန်တော်မြတ်လည်း ၀မ်းသာ အားရလွန်းကာ ပြန်လည်ထွက်ခွာလေသည်။
မေ့ရာဂ်ျ ကဏ္ဍက ဒီလောက်ဘဲဖြစ်သော်လည်း ဒီလောက်နဲ့ဘဲ မပြီးပါ။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) က မိမိ၏ ဆွဟာဘာများကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ပေးအပ်လိုက်သော တာဝန်များအနက် ဆွလာသ် တာဝန်ကို တင်ပြလိုက် ပါတယ်။ သို့ဖြစ်၍ တစ်ယောက်ကနေတစ်ဆင့် တမန်တော်မြတ် မေ့ရာဂ်ျ ခရီးထွက်သည့်သတင်းဟာ အပြင်ကို တောမီးလောင်သလို ပြန့်နှံ့ ကုန်တော့သည်။ ကာဖိရ် ကိုရိုင်းရ်ှတို့သည် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) အနေဖြင့် လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ည အတွင်း မက္ကာမြို့မှ ဂျေရုစလင် မြို့သို့ ခရီးထွက်ရန်သည် လုံးဝ မဖြစ် နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုကာ တမန်တော်မြတ်ကို အပြစ်ဖို့ကြလေသည်။ မကောင်းပြောဆိုကြလေသည်။ အချို့သော မွတ်စ်လင်မ်တို့သည်လည်း တမန်တော်မြတ်၏ မေ့ရာဂ်ျ ခရီးစဉ်ကို ယုံရတစ်ဝက် မယုံရတစ်ဝက် ဖြစ်နေကြချိန် တွင် အချို့သော မွတ်စ်လင် တို့သည် အဘူဘကရ် သခင်ထံသို့ သွားရောက်ကာ မေ့ရာဂ်ျ အကြောင်းကို ပြေပြ လေသည်။ အဘူ ဘကရ်သခင်သည် ၄င်းသတင်းကို ကြားသောအခါ လာပြောပြသူတို့ကို ပြောပြသည်မှာ အကယ်၍ မုဟမ္မဒ် (ဆွ) သည် ထိုသို့ ပြောဆိုခဲ့ပါက အမှန်ပင်ဖြစ်မည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် မည်သည့်အခါမျှ လိမ်လည် ပြောတတ်သူမဟုတ်ဟုဆိုပါသည်။ အဘူဘကရ်သခင်သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင် တမန်တော် မြတ် (ဆွ) လာရောက်ကာ မေးလေသည်။ ““အိုမုဟမ္မဒ် (ဆွ) အသင်သည် မေ့ရာဂ်ျ ခရီးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောပြခဲ့ ပါသလား”” ဟု မေးလေသည်။ တမန်တော်မြတ်က အိုအဘူဘကရ် ငါသည် အမှန်ပင် ၄င်းခရီးကို ထွက်ခဲ့ပြီး အဖြစ်အပျက်များသည် အမှန်ပင်ဖြစ်သည်”” ဟု ပြောဆိုပါသည်။ ထိုါအခါ အဘူဘကရ် သခင်က အို မုဟမ္မဒ် အသင်ပြောဆိုသမျှသည် အမှန်တွေချည်း ဖြစ်ပါသည်”” ဟု ပြန်ပြောပါသည်။ ထိုအခါ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) က အို အဘူဘကရ် အသင်သည် အမှန်ကိုပြောသူဖြစ်သဖြင့် အသင့်ကို မှန်ကန်သူ ““အဆ်ဆွိဒ်ဒိက်”” ဟု ခေါ်ဆိုထိုက်ပေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အဘူဘကရ် သခင်၏ နံမည်တွင် ““ဆွိဒ်ဒိက်”” ဂုဏ်ရည်ကို ထိုနေ့မှစကာ လူတို့သည် ခေါ်ဝေါ် သုံးဆွဲကြလေသည်။
နောက်ရက်အနည်းငယ်တွင် လမ်းပျောက်နေသည့် ကုန်သည် အုပ်စုသည် မက္ကာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ သူတို့သည် လမ်းခရီးတွင် လမ်းပျောက်နေခဲ့ကြောင်း၊ သောက်စရာရေပင် မရှိဖြစ်နေခဲ့ကြောင်း၊ လမ်းခရီးတွင် လူတစ်ယောက်ကို မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ထိုသူသည် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ပင်ဖြစ်ကြောင်း သူတို့ကို လမ်းပြ သည့်အပြင် သောက် စရာရေကို လည်း ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းြေူပာပြကြလေသည်။ ထိုသတင်းသည် မက္ကာမြို့တွင် တမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားရာ ကာဖိရ်တို့သည်လည်း ကြားကြလေသည်။ လူအများသည် တမန်တော်မြတ်၏ မေ့ရာဂ်ျခရီးကို ယုံကြည်လာကြလေသည်။
အထူးသဖြင့် မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် ၄င်းမေ့ရာဂ်ျနေ့ကို အလွန်ထူးမြတ်သည့်နေ့အဖြင့် သွင်တ်မှန်ကြပြီး ၄င်းနေ့တွင့် အလူအတန်းများ လုပ်ကြ၊ ဇကိရ်များ တတ်အားသ၍ လုပ်ကြ၊ ရိုဇာဥပုဒ် စောင့် တည်ကြရင်း ၄င်းနေ့၏ ဖဇီလသ် အကျိုးကျေးဇူးကို ရယူလေ့ရှိကြပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မိမိတို့သည် ၄င်းနေ့တွင် ရိုဇာ နဖိလ် စောင့်ထိန်းကြကာ ဖရဇ် ဆွလာသ်များကို မပြတ်တမ်း ဖတ်ကြရင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျေးဇူးတရားကို တုံ့ပြန်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
http://myanmarwind.blogspot.com/2010/07/sirah17-lessons-from-al-isr… မှ ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“မြတ်တမန်၏ မေအ်ရာဂ်ျ ကောင်းကင်ယံခရီး”
ဤဿမမြောက်နှစ်မှာပင် မြတ်တမန်မှာ အလ်အိဆရ (ဂျေရုဆလင်သို့ ညယံခရီးစဉ်) နှင့် မေအ်ရာဂ်ျခေါ် ကောင်းကင်အာကာ နန်းတက်မြန်းခြင်း ခရီးစဉ်တို့ကို ပြုတော်မူခဲ့သည်။
ဤခရီးစဉ် ဤတက်မြန်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး မွတ်စလင်ဘာသာရေးပညာရှင်များက အထူးအလေးထား အရေးထားခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ဤအကြောင်းကို အသေးစိတ်တင်ပြ သွားပါမည်။ ဤနေရာ၌ ဤဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေအ်ရာဂ်ျ ဟူ၍ သုံးနှုန်းချက်ကား ကုရ်အာန် ကျမ်းတွင် မရှိသည်ကို သိထားကြရမည်။ မယုံကြည်သူများက မြတ်တမန်ထံသို့ မိုးဝတိံထက်သို့တက်ပြခြင်း၊ မိမိတို့ဖတ်ဖို့ ကျမ်းစာတစ်ဆူကို ယူပြီး ပြန်ဆင်းလာပြခြင်း ကဲ့သို့ အံ့ဖွယ်ရာများကို ပြသပေးလှဲ့ပါဟု တောင်းဆိုခဲ့ကြရာတွင် “တရကာ ဖစ္စမားအီ” (အသင် ကောင်းကင်တက်ပြ) ဟူသော ဝေါဟာကိုသာ သုံးခဲ့ကြသည်။ တ-ရ-က- အ (အသင်တက်ပြ) သည် ရကီယား ခေါ် “သူမြင်းပေါ်သို့တက်သည်” အထက်ကိုတက်သည် ဟူသော စကားရပ်က လာပါသည်။
မေအ်ရာဂ်ျ ဟူသော ဝေါဟာရ ကလည်း သူအထက်ကိုတက်သည်ဟူသော အနက်ကို ဆောင်သော အရဂျာ စကားလုံးက လာပါသည်။
ဤစကားရပ်နှစ်ခုအကြားတွင် ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပသည်။ ကုရ်အာန်က ခန္ဓာကိုယ်နှင့် တက်ခြင်းကို ရကီယာဖြင့် သုံးထားပြီး ကောင်းကင်တမန်များ၊ စေတမန်များနှင့် ရုဟ် (သို့မဟုတ်) ဂျစ်ဗရာအီလ်တို့ တက်ကြွခြင်း ကိုမူ အရဂျာ ဟု သုံးထားခြင်းကို အောက်ပါ ပါဒတော်တွင် တွေ့ကြရပါသည်။
“ကောင်းကင်တမန်များသည် လည်းကောင်း၊ (ကြီးကဲသော) ဝိညာဉ်တော်သည်လည်းကောင်း၊ အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးသို့ တစ်ရက်နှင့် တက်ရောက်သွားကြသည်။ ဤနေ့တစ်ရက် ကား နှစ်ပေါင်း ငါးသောင်းနှင့် ညီသတည်း။” (မြတ်ကုရ်အာန် ၇၀း၎)
မြတ်တမန်၏ ကောင်းကင်ယံခရီးစဉ်မှာ စက္ကန့်ပိုင်း မိနစ်ပိုင်းလေးမျှသာဖြစ်ပြီး ရက်ရှည်လများ နှစ်နှင့်ချီထားသည့် ခရီးစဉ်မဟုတ်ခြင်းအတွက် အတ္ထုပတ္တိရှင်တိုင်းကပင် မြတ်ကုရ်အာန် တွင် ကောင်းကင်တမန်များ (သို့မဟုတ်) ဝိညာဉ်များ တက်မြန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလ္လာဟ်ရှင် က သုံးနှုန်းထားတော်မူသလိုပင် မေအ်ရာဂ်ျ ဟု တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ရေးဖွဲ့ကြခြင်းဖြစ် ပါသည်။
ဤရှေ.ပြေးအချက်ကို ဦးစွာနှလုံးသွင်းထားပြီးမှ နောက်ပိုင်းတင်ပြချက်များကို စာရှု.သူတို့ အလေးထား မှတ်သားသွားကြစေလိုပါသည်။
ဤဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ရဂျဗ်လ ၂၇-ရက်ည (ဒဿမမြောက် သာသနာပြုနှစ်၏သတ္တမလ) တွင် မြတ်တမန်မှာ ဝမ်းကွဲနှမတော်ဖြစ်သည့် အဘူတွာလိဗ်၏ သမီးတော် ဟင်းဒ်၏ အိမ်ဂေဟာတွင် စံနေခိုက်ဝယ်ဖြစ်သည်။ ဟင်း(ဒ)၏ တင်ပြချက်အရ …“ဤညက မြတ်တမန်မှာ ကျွန်မ၏ စံအိမ်ဝယ် အိပ်စက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ညယံဝတ်ဖြည့်ခြင်းပြီးမှ အိပ်စက်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ကျွန်မတို့ကလည်း အိပ်စက်ခဲ့ကြပါသည်။ အာရုဏ်တက်လုလု တွင် ကျွန်မတို့တစ်တွေကို မြတ်တမန်က “အိုအွမ္မ့ဟာနီ (ဟင်းဒ်၏ ဝိသေသအမည်တစ်ခု) ငါသည် အသင်တို့နှင့်အတူ ညဘက်က ဤတောင်ကြားတွင် ဝတ်ပြုခဲ့ခြင်းကို အသင်တို့ အမြင်ပင်။ ယင်းနောက် ငါသည် မြင့်မြတ်သော မြေသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဝတ်ပြုခြင်းအမှုကို ပြုခဲ့ပါသည်။ ယခုအသင်တို့၏ ရှေ.တွင် နံနက်ယံ ဝတ်ပြုမှုကို ပြုခဲ့ပါသည်” ဟု မိန့်ဆိုလာပါသည်။ “အို အလ္လာဟ်အရှင်၏ တမန်တော် ဤအကြောင်းကို အခြားသူများထံ ပြောကြားခြင်းမပြုပါလေနှင့်” အသင့်ကို သူတို့က မုသားဆိုခြင်းသာ တကား ဟု ယိုးစွပ်ပြီး ဘေးဥပါဒ်ပေးကြပါလိမ့်မည်” ဟု ကျွန်တ်ာမျိုးမက လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်ဟု သိကြရပါသည်။
“မြတ်တမန်ကမူ ကျွနိုပ်အနေနှင့် ဆိုရေးရှိက ဆိုရမည်” ဟု မိန့်တော်မူရှာပါသည်။ တချို့က ဤပါဒတော်ကို လက်ခံခြင်းမပြုကြပါ။ ကအ်ဘာအတွင်းရှိ အမိုးပွင့်ဖြစ်သော ဟာတင်မ်ခေါ် နေရာ တွင် အိပ်ပျော်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဤနေရာကပင် ညဉ့်ခရီးစခဲ့သည်ဟု အချို့ သော သြဝါဒတော်များကို မှီငြမ်းပြုပြီး ဆိုကြပါသည်။ ဤကိစ္စဖြစ်ပွားရာ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်နှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း ကွဲလွဲချက်များရှိကြပါသည်။ အချို.ကမူ မြတ်တမန်၏ သာသနာပြုနှစ် သက်တမ်း ၁၀ နှစ်မြောက်နှင့် ၁၃ နှစ်မြောက်အကြားတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ မဒီနာမြို. သို့ ပြောင်းရွှေ.စံတော်မူခြင်း မရှိမီအလျင်က ဖြစ်ရပ်များ၏ ရက်စွဲအတိအကျကို တိတိကျကျသိရှိရေးမှာ မလွယ်ကူလှပါ။ ထိုစဉ်က မွတ်စလင်တို့မှာ စုစုစည်းစည်း နေထိုင်ကြခြင်း မရှိသေး၍ တစ်ကြောင်း၊ အန္တရာယ် အခက်အခဲအဝဝိကို ခါးသီးစွာ ကြုံတွေ့နေကြရချိန်ဖြစ်၍ တစ်ကြောင်း ဖြစ်ရပ်အသွယ်သွယ်ကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ကြခြင်း မရှိသေး၍ဖြစ်ပါသည်။ အနီးစပ်ဆုံးရက်စွဲကို တင်ပြနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤညယံခရီးနှင့် အာကာနန်းထက်ခရီးစဉ်တို့မှာ တစ်ညတည်း၌ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းလော၊ သို့တည်းမဟုတ် တစ်ညချင်းဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းလော ဆိုခြင်းကိုလည်း အတိအကျပြောနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါ။
တစ်ဖန်အချို.က ညယံခရီး နှင့် ကောင်းကင်နန်း ခရီးနှစ်ခုစလုံးကို မြတ်တမန်က ရုပ်ခန္ဓာနှင့် သွားခဲ့ခြင်းဟု ဆိုကြသည်။ (ဂျေရုဆလင်သို့ ရုပ်ခန္ဓာဖြင့် ကြွသွားသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကောင်း ကင်ဘုံအမြင့်ဆုံးစခန်းကို တက်မြန်းသည်ဟူ၏)
တချို.ကမူ ဤနှစ်ခုစလုံးကို နာမ်သဘောအရ ပြုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ရုပ်ခန္ဓာကမူ နေမြဲနေရာ၌ ရှိရင်မပျက်ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကြင်ယာတော် အာအိရှာ၊ အဗူစုဖ်ယန်နှင့် ဆလမန်ဖါရစီတိုိ့က ဤအဆိုကို ထောက်ခံကြသည်။
အချို.ကျပြန်တော့ ညယံခရီးကိုသာ ရုပ်ခန္ဓာဖြင့် ကြွသွားခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နန်းသို့မူ နာမ်သဘောဖြင့် တက်မြန်ခြင်းဟု နှစ်ချက်စလုံးအံဝင်အောင် ဆိုကြပြန်သည်။
ဤအကြောင်းကို ကျမ်းပြုတင်ပြကြရာ၌ ဤယုံကြည်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ ကွဲလွဲချက်များ ပေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ သိပ္ပံပညာရပ်က ဤပြဿနာ၏ အဖြေကို အထင်းသားပေးပြီး ဖြစ်ပါ သည်။ ရှေးခေတ်ဘိုးဘေးဘီဘငါတို့ထက် ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်တွင် မေအ်ရာဂ်ျနှင့်ပတ်သက်ပြီး နားလည်ဖို့ရာမှာလွန်စွာမှပင် လွယ်ကူလွန်းနေပါသည်။
ရေဒီယိုက မိုင်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာသော အရပ်မှ လူတို့၏ အသံ ကြားစေနိုင်သလို ရုပ်မြင်သံကြားကလည်း အသံကိုသာမက ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်ကိုပါ မြင်တွေ့နိုင်စေပြီးဖြစ် ပါတယ်။ ရှေးခေတ်လူသားတို့အနေနှင့် ဤအချင်းအရာ အကြောင်းကို ရုပ်သဘောနှင့်သာ နားလည်မိကြခြင်းမှာ မြတ်တမန်၏ အတွေ့ကို ဤနည်းဖြင့်သာာ နားဝင်နိုင်ကြစရာလမ်းရှိ၍ သာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံအရ အမြင်အာရုံဟူသည် အလင်းတန်းများနှင့် အနုမြူတို့၏ အင်မတန်မှ သေးငယ်လွန်းလှသော အစက်အမှုန်များ၏ ပယောဂကြောင့် ဆိုသည်ကို အထင်းသား သိထားကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရောင်စဉ်အလင်းတန်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် အနုမြူအစက်အမှုန် ဖန်တွန်ကလေးများကြောင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ်လျင် လည်း နှစ်ခုစလုံးကြောင့်လော ဆိုသည်ကို မသိကြလင့်ကစားလည်း အမြင်အာရုံတွင် ထင်ဟပ်လာရခြင်းကမူ ရောင်စဉ်တန်းများနှင့် အနုမြူ အစက်အမှုန်များကြောင့်သာလျှင် ဝတ္ထု၏ ပုံရိပ်က မျက်စေ့တွင် ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရာဝတ္ထုက ထုတ်လွှင့်သော ရောင်စဉ်နှင့် အနုမြူမှုန်တို့က မျက်စေ့တစ်ကမ်းတွင် ရှိနေသည့်ပုံကို မြင်ကြရမည်ပင်ဖြစ်သည်။
အိပ်မက်မက်နေချိန်၌ အချိန်နှင့် လဟာဆိုသည်မှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားသည်ကို အားလုံးအသိပင် ဖြစ်ပါသည်။ အိပ်မက်မက်ချိန်က စက္ကန့်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်။ စိတ်အတွင်းမှာတော့ ရက်များစွာ လများစွာ ကြာသကဲ့သို့ ထင်ရသည်။ အချိန်ဟူသည် မရှိတော့သည့် ပမာကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့မှာ အိပ်မက်အတွင်း၌ တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ပျံဝဲနေခဲ့ကြသည်။
မြတ်တမန်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆိုရပါမူ အလ္လာဟ်အရှင်က ကိုယ်တော်အား အရှင်၏ ပညတ်တော်များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည့် ဂျစ်ဗရာအီလ် (ဝါ) ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သော ဝိညာဉ်ကို ချီးမြှင့်ထားတော်မူပေသည်။ မြတ်တမန်က အရာခပ်သိမ်းကို ဝဟီဟူသော အမြင်ဖြင့် မြင်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်က လူတို့တွင် ဤသို့မြင်နိုင်ချေမရှိပေ။ ရှိလည်းမရှိနိုင်ကြပေ။ မြတ်တမန်၏ အလ္လာဟ်ရှင့် လမ်းစဉ်ဖက်ကို ဖိတ်ခေါ်ချက်က ဤနာမ်ရေးရာအသိကို လုံးလုံးလျားလျား အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို ငြင်းပယ်ပြီ ဆိုရုံနှင့်ပင် စောဒက တက်စရာလမ်း မရှိတော့ပေ။ မြတ်တမန်ကို ဤအသိနှင့် ထားခဲ့ပါမူ မေအ်ရာဂ်ျနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိဖို့ရာမှာလည်း ရှင်းလွန်းနေပြီဖြစ်ပါသည်။ “မေအ်ရာဂ်ျကား ဝဟီဗျာဒိတ်တော်၏ အဆင့်ဒီဂရီကို မြှင့်တင် လိုက်ခြင်းမှအပ အခြားမဟုတ်ပြီ”။ မြတ်ကုရ်အာန် အပါအဝင် အခြားအခြားသော ကျမ်းဂန်များက မြတ်တမန်၏ အလျင်က ပွင့်ပေါ်ခဲ့ကြသော တမန်တော်များတွင်လည်း မြတ် တမန်ကဲ့သို့ပင် မေအ်ရာဂ်ျ ရှိခဲ့သည်ကို ပြဆိုထားကြပါသည်။
တမန်တော်များသည် သိပ္ပံပညာရှင်များမဟုတ်၊ တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများမဟုတ်ကြပါ။ စကြဝဋာ တစ်လွှား၌ ရှိနေကုန်သော ပရမတ္တအမှန်တရားကိုသာ ဆိုခြင်း ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဆိုချက် ပြောချက်တို့ကား သိပ္ပံက ပြောဆိုချက်ထက်လည်းကောင်း၊ ဒဿနိကပညာရှင်၏ ဒဿနထက်လည်းကောင်း ပိုပြီးသိရခက်၊ နားလည်ရခက်ပါသည်။ နက်နဲကျယ်ဝန်း လွန်းလှပါသည်။ တမန်တော်များအနေနှင့် မိမိတို့ဆိုသမျှ ချင်းရာများမှာ ပကတိအမှန်တရား ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကို မည်သို့နှလုံးသားတွင်းက သိနိုင်ကြပါသနည်း။ တစ်လမ်းသာလျှင် ရှိပါသည်။ တကယ့်အတွေ့ အကြုံအရ သိကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဤအတွေ့ကို ဝဟီအတွင်း အမြင်ဖြင့် ရယူကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်ကြီးအီဗရာဟင်မ် လည်း ဤအတွေ့၊ တမန်တော်မူဆာမှာ လည်း ဤအတွေ့၊ တမန်တော်မုဟမ္မဒ်မှာလည်း ဤအတွေ့ပင်။ အားလုံးတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
အသံထွက်ရုပ်ရှင်တွင် လူတို့က ဆိုကြ၊ ကကြခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်ကြ၊ ကြားကြရသည်။ သို့သော် တကယ့်ဇာတ်ဆောင်ကတို့ကို မြင်ကြကြားရခြင်းကားမဟုတ်ပါ။ မြင်သည်ကြားသည် ဟုဆိုငြား လည်း တကယ်ပကတိမြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သိပ္ပံပညာ၏ ကျေးဇူးကြောင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်တစ်ရာအလျင်က မဖြစ်နိုင်သည်တို့မှာ ယခုဖြစ်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ သိပ္ပံ ပညာရပ် က အကန့်အသတ်မရှိ၊ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ တိုးတက်မဆုံးရှိနေပါသည်။
မြတ်တမန်အနေနှင့် စကြဝဋာတဝန်းကို လှည့်ပတ် ကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်ပေ။ စကြဝဋာကြီးကိုထံ ဆောင်ကြဉ်းပြဖို့ရန်သာ ရှိပေသည်။ အလ္လာဟ်ရှင် မြတ်တမန်ထံ ဗျာဒိတ် ဝဟီခွန်းချွေခြင်း ကပင် အံ့ဖွယ်ပြာဋိဟာ အဝဝတွင် အံ့ဩဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံးဟု ဆိုရပေမည်။ မြတ်တမန်၏ အတွေ့အမြင်က ရိုးရိုးအိပ်မက်သဘောမျိုးကား မဟုတ်ပေ။ ဘုန်း သမ္မာတော်ရှင် အလ္လာဟ်က လူသား အားလုံးအလည်တွင် ဂုဏ်သရေ အထွန်းလင်းဆုံးသော မဟာလူလားထံ အကောင်းဆုံးသော ချီးမြှင့်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။ မြတ်တမန်၏ အမြင်နှင့် အကြားအာရုံခံ အင်္ဂါများမှာ အချိန်နှင့်ကာလ၏ နှောင်ကြိုးခံမဟုတ်ပေ။ ဤကမ္ဘာမှမဟုတ်ဘဲ အာကာသအတွင်းမှနေပြီး နေလဂြိုလ်ကြယ်၊ နက္ခတ်တာရာများနှင့် မြေကမ္ဘာကို ရှုမြင်ရသူကဲ့ သို့ပင် ရှုမြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေ သည်။ လူသားနွယ်၏ အတိတ်နှင့်အနာဂတ်ရေးအဝဝကို သိမြင်တော်မူခဲ့သည်။ ခေတ်အသီးသီးတွင် ပွင့်တော်မူခဲ့ကြသော တမန်တော်အဆူဆူနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများ ကိုပါ မြင်စွမ်းတော်မူခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်ရှင်၏ ကောင်းကင် တမန်များက ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို စွမ်းဆောင်နေကြပုံနှင့် သဘာဝဓမ္မဥပဒေ၏ စိုးမိုးမှုအောက်တွင် အရာရာ က လိုက်နာရင်း မပျက်ရှိနေကြပုံကို သိမြင်တော်မူခဲ့သည်။
မြတ်တမန်၏ ဝိညာဉ်က အလ္လာဟ်ရှင်ကို ဝတ်ပြုလျက်ရှိနေခဲ့သည်မှာ မိမ်ိအား တမန်တော်အဖြစ် မခန့်အပ်မီ အလျင်ကတည်းက၊ စကြဝဋာ၏ သရုပ်သကန်ကို ရှင်းပြခြင်းမပြုမီ အလျင် ကတည်း ကပင်ဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် ကောင်းကင်တမန် ဂျစ်ဗရာအီလ်မှတစ်ဆင့် မိမိအတွက် သင်ခန်းစာကို လေ့ကျင့်ခဲ့သည်က ၁၀နှစ် တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီ။ ကိုယ်တော့် အားမိန့်ဆို ထားသမျှ အဝဝနှင့် ကတိတော်ပြုထားသမျှ အဝဝ တို့ကို ယခုဆိုလျှင် မျက်ဝါးထင်ထင် ဖြစ်သော သက်သေတစ်ရပ်ရခဲ့ချေပြီ။ သူ့အသက်အား လက်မရွံ့စတမ်း စတေးပစ်မည့် ရန်သူများက ဤကမ္ဘာမြေတွင် ရှိလာမည်ကိုလည်း သိခဲ့ရသလို အလ္လာဟ်အရှင်က မိမိ၏ အဆွေတော်မွန်ကြီး အဖြစ်နှင့် မြတ်တမန်၏ အဆုံးအဆင့်က ဘယ်ပုံ၊ ရန်သူတို့၏ အဆုံးအဆင့်က ဘယ်ပုံဆို သည်ကို ပြသလိုရင်း ရှိတော်မူခဲ့လေသည်မို့…။
စာရှုသူတို့အနေနှင့် ဘဝင်မကျနိုင်စရာ အချက်တစ်ချက်ကား ရှိနေပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် ရာစုပေါင်းများစွာ၏ ဖြစ်ရပ်များကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သို့တည်းမဟုတ် မိနစ်ပိုင်း အတွင်း အပြည့်အဝတစ်လုံးတစ်ခဲတည်း သိရမြင်ရဖို့ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးအဖို့ ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်ပါမည်လောဟု မေအ်ရာဂ်ျ အပေါ် သံသယဝင်မိသော အချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကား ရှိပါသည်။ စာရှုသူတို့အနေနှင့် စိတ်ဝင်စားကောင်းဝင်စားနိုင်ပါသည်။
စာရေးသူသည် ရေကူးဝါသနာထုံပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်က ဒီရေတက်ချိန်ဝယ် ပီနနမြို. ရေနက်ရာ ဒေသတစ်ခုတွင် ရေကူးလျက်ရှိစဉ်က ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ပင်လယ်အောက်ခြေတွင် ထိုးစိုက်ထားသော ဝါးလုံးတစ်ချောင်းရှိပါသည်။ ရေအဟုန်ကြောင့် ဝါးလုံးထိပ်ဖျားက တယမ်းယမ်းဖြစ်နေ သည်။ မြွေတစ်ကောင် ၏ ခေါင်း ပမာသို့ ရေကူးသူတိုင်း အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါသည်။ ရေကနက်ပြီး ကျောက်ဆောင်စွန်းများရှိနေသဖြင့် ဤသို့ဝါးလုံးစိုက်ပြီး ဤနေရာသို့ မချဉ်းကပ်ကြရန် သတိပေး ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူက ဤအကြောင်းကို မသိပါ။ ဤကိစ္စကို အလေးနက်လည်း မတွေးမိခဲ့ပါ။ မြွေဟုထင်ပြီး ရေကူးသူတိုင်း အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရသော ဤဝါးလုံးကို ဆွဲထုတ် ပစ်လိုမိ ပါသည်။
ဤအတွက် ရေငုတ်ပြီး ဤဝါးတိုင်ကို ဆွဲနှုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။ ရေကို ငုတ်ဆင်းချလိုက်စဉ် စာရေးသူ၏ ဒူးခေါင်းမှာ ကျောက်ဆောင်နှင့် တိုက်မိခဲ့ရာ အသဲခိုက်မတက် နာကျင်ပြီး သတ်ိလစ်မတက်ဖြစ်ကာ ရေနစ်သွားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ရေ၏ အဟုန်ကြောင့် ရေပေါ်ပေါ်တက်လာခဲ့ပြီး ထပ်မံနစ်သွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မျိုချမိသော ရေကို အန်ထုတ်မိရာက စာရေးသူမှာ သတိပြန်လည်လာခဲ့ပါသည်။ ယင်းအရင်ကမူ တစ်မိနစ်တာမျှ သတိလစ်ပြီး ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် အဆက်ပြတ်သွားခဲ့ပါသည်။ ဤတဒင်္ဂတာ သတိမေ့မျောနေစဉ် အတွင်းတွင် စာရေးသူ လေးနှစ်သားဘဝမှသည် ရေကူးနေသည့်ကာလအထိ ဖြစ်ရပ်များကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်ခဲ့ရပါသည်။
ဤအဖြစ်အပျက်မမျိုးကို အခြားသူများလည်း ကြုံတွေ့ဖူးကောင်းကြုံတွေ့ဖူးကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များက လူသား၏ စိတ်မှာ တစ်မိနစ်တာအတွင်းဝယ် နှစ်ကာလများစွာ ကြညောင်းသော ဖြစ်စဉ်များကို အထင်းသားမြင်တွေ့ကြရပုံကို သက်သေထူပြနေပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် မြတ်တမန်၏ မေအ်ရာဂ်ျနှင့် ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်နိုင်စရာ မယုံကြည်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိနိုင်ပါချေ။
တမန်တော်မူဆာ၏ မေအ်ရာဂ်ျ အမြင်
သာမန်အချိန်တွင် လူတစ်ဦးအနေနှင့် မမြင်နိုင်သော အချင်အရာတို့ကို အသိကင်းမဲ့နေစဉ်၌ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အနေနှင့် မြင်နိုင်ခြင်းကို တမန်တော်မူဆာ၏ တူးရ်တောင်တွင် ဖြစ်ရပ် အရ သိနိုင်ပါသည်။
“တမန်တော်မူဆာသည် ချိန်းဆိုထားသော နေရာသို့လာခဲ့ရာ၊ သူ၏ အရှင်ကဝဟီဆင့်ဆို တော်မူသည်။ ဤတွင်သူက “အို” ကျွန်တော်မျိုး၏ အရှင် … အရှင်အား မျက်ဝါးထင်ထင်ဖူးမြင် အံ့သောငှာ ကျွန်တော်မျိုးအား ကိုယ်ထင်ပြတော်မူပါ” ဟု တင်လျှောက်၏။ အလ္လာဟ်ရှင်က “အသင်သည် ငါအရှင်အား ဖူးမြင်ခြင်းငှာ မစွမ်းသာရာ၊ သို့သော် တောင်ကိုစိုက်ကြည့်လော့။ ဤတောင်က နေရာမယွင်းရှိနေလျှင်မူ ငါအရှင်အား အသင်မျက်ဝါးထင်ထင်ဖူးမြင်နိုင်အံ့” ဟု ဆိုတော်မူသည်။ အလ္လာဟ်ရှင်က မိမိ၏ ဘုန်းသမ္ဘာတော်အစုံကို ပြသရုံနှင့် တောင်သည် အပိုင်းပိုင်းအစစ ဖြစ်ကာပြိုလဲသွားတော့သည်။ မူဆာခမျာမှာလည်း သတိလစ် လဲကျသွားရှာသည်။ ပြန်လည်သတိဝင်လာသောအခါတွင် သူက “အိုအရှင် အရှင်သည် ချို.တဲ့ခြင်းအပေါင်းက ကင်းစင်ပါ၏။ ကျွန်တော်မျိုးအနေနှင့် အရှင့်ဘက်သို့ လှည့်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်သည် ယုံကြည်သူတို့အလည်တွင် ပထမဆုံးဖြစ်ပါ၏” ဟု တင်လျှောက်၏။ (ကုရ်အာန် ၇း၁၄၃)
ဤသည် မူဆာနဗီ၏ မေအ်ရာဂ်ျဖြစ်ပါသည်။ သူသတိလစ်နေစဉ် အခိုက်ဝယ် သူ့အား ယုံကြည်သူတို့အလည်တွင် ပထမဆုံးဖြစ်စေသော အကြောင်းခံများကို အတွင်းစက္ခုအရ သူမြင်တွေ့ ခဲ့ရသည်။ တမန်တော်မူဆာအနေနှင့် အလ္လာဟ်အရှင်ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ဖူးတွေ့နိုင်ခြင်း မရှိနိုင်ပေ။ နောက်ပိုင်းလားသော ပါဒတော် နှစ်ပါးအရကြည့်လျှင်မူ ဤသို့ သတိမေ့မျောနေ စဉ်အတွင်းဝယ် မူဆာနဗီထံ ဝဟီထူးတစ်ရပ်ကျခဲ့ခြင်းကမူ ထင်ရှားနေပေသည်။
(ထိုအခါအလ္လာဟ်)အရှင်မြတ်သည် (ဤသို့)မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ အို-(နဗီတမန်တော်) မူစာ၊ ဧကန်စင်စစ် ငါအရှင်မြတ်သည် အသင့်အား လူအများပေါ်၌ မိမိရစူလ်တမန်တော် အဖြစ်ကို ချီးမြှင့်တော်မူခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငါအရှင်မြတ်သည် အသင်နှင့်စကား ပြောဆိုတော်မူခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရွေးချယ်မြှောက်စားတော်မူ လိုက်ပြီ။ သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်သည် အသင့်အား ငါအရှင်မြတ်ချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူသည်(များ)ကို ယူပါလေ။ ၎င်းပြင်အသင်သည် ကျေးဇူးတော်ကိုသိတတ်သူ တို့တွင် အပါအ၀င်ဖြစ်ပါလေ။
ဤသည်ကား တမန်တော် မူဆာက မေအ်ရာဂ်ျအတွင်းက ရရှိခဲ့သော ပညတ်တော် (၁၀)ပါးပင် ဖြစ်သည်။ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်မှာလည်း အလားတူပင် ချီးမြှင့်ခြင်းခံတော်မူ ခဲ့ရသည်။ ထိုကြောင့်ပင် ဝရကာ ဗင်နောင်ဖိလ်က မုဟမ္မဒ်သခင်နှင့် ခဒီဂျာသခင်မတို့ကို “မူဆာနဗီထံ ကျခဲ့သည့်နည်းတူ၊ ကြီးမြတ်သော ဥပဒေသတော်နှင့် ပညတ်တော်တို့က သူ့ထံ ကျခဲ့ခြင်း”ဟု ဆိုခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပေသည်။
တမန်တော်ကြီး အစ်ဗရာဟင်(မ) မှာလည်း မေအ်ရာဂ်ျရှိခဲ့သည်။
“ထိုနည်းတူစွာ ငါအရှင်မြတ်သည် အစ်ဗ်ရာဟီမ်အား လေးနက်စွာ သက်ဝင်ယုံကြည်သော သူတို့တွင် အပါအ၀င်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ငါအရှင်မြတ်သည် မိုးများနှင့်ကမ္ဘာမြေကို စိုးပိုင် တော် မူကြောင်း ကို ပြသတော်မူခဲ့လေသတည်း။ (ကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ် ၆း၇၅)
ဤနောက်ဆုံး ကိုးကားပြထားသော အာယတ်တော်အရ မေအ်ရာဂ်ျဟူသည် ရှင်းလင်းပြခြင်း ဟုအနက်ရပါသည်။ တမန်တော်မြတ်အနေနှင့် မိမိရထားသော ဗျာဒိတ်တော်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပကတိသစ္စာတရားကို ထင်းလင်းစွားသိမြင်စိမ့်သောငှာ မိမိအားဆိုထား မိန့်ထားသမျှကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရှင်းလင်းသွားစေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ တမန်တော်မူဆာ၊ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်နှင့် တမန်တော် အစ်ဗရာဟင်(မ) အားလုံးသည်ပင် အလားတူ အသိထူးကို ရရှိခံစားခဲ့ကြသည်။ ဤအာယတ်တော်အားလုံးတွင် အရဗီရင်းမြစ် အက္ခရာ “ရားအ =သူမြင်ခဲ့သည်”ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဤ “ရားအ” ကား ထူးကဲအမြင်အရ မြင်ခြင်းကို ဆိုပါသည်။ သာမန်မြင်ခြင်းကိုမူ နဇရ်အ ဟုသုံးပါသည်။
မုဟမ္မဒ်သခင်၏ အမြင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုရ်အာန်၏ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်
မုဟမ္မဒ်သခင်၏ အမြင်အသေးစိတ်ကို စူရာ (၁၇) နှင့် (၅၃) (မက္ကာမြို.တွင်ကျ စူရာများ)တွင် တွေ့ရသည်။ ပထမစူရာက အစ္စရာအီလ်အမျိုးသား သို့တည်းမဟုတ် အလ်အစ္စရ=ညယံခရီး ဟု ကျော်ကြားသော စူရာဖြစ်ပြီး ဒုတိယစူရာကား ကြယ်တာရာဏ္ဍဖြစ်ပါသည်။
အထက်အမည်ပါ ပထမစူရာမှာမူ စကားလုံးများများပြားပြား ဆိုမထားပါ။ မုဟမ္မဒ်သခင်ထံ ဘာကိုဗျာဒိတ်ပြုခဲ့သည်ကိုသာ ဆိုထားသည်။ ဤစူရာ၏ ပထမပါဒတွင် ဤသည်ကို တိုက်ရိုက်ဆိုထားသည်။
အကြင်အရှင်မြတ်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူ၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် တစ်ည၌ မိမိကျွန်(နဗီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်)အား“ မတ်စ်ဂျစ်ဒ်ဒေဟရာမ် ”ထူးမြတ်သော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှ ထိုကျွန် (နဗီတမန်တော် မုဟမ္မဒ်)အား မိမိ၏အချို့သက်သေ လက္ခဏာတော်များကို ပြသတော်မူအံ့သောငှာအကြင်“မတ်စ်ဂျစ်ဒ်ဒေအတ်က်ဆွာ” (အလွန်ဝေးလံလှသော)ဗလီ ၀တ်ကျောင်းတော် သို့ ခေါ်ဆောင်၍ သွားခဲ့တော်မူ၏။ ငါအရှင်မြတ်သည် ထိုဗလီဝတ်ကျောင်းတော် ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကုို ရ်ကတ်သုခ ချမ်းသာမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စေတော်မူခဲ့၏။ ဧကန်မလွဲ ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင်လျှင် အကြွင်းမဲ့ကြားတော်မူသောအရှင်၊ အကြွင်းမဲ့ ခွဲခြားသိမြင်တော်မူသောအရှင်၊ ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။ (ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ၁၇း၁)
မြတ်သောဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးကား ကအ်ဘာဖြစ်ပြီး အလှမ်းဝေးရာ ကျောင်းတော်ကမူ ထိုစဉ်က ဝတ်ပြုရာ၌ မြတ်တမန်၏ ရွှေမျက်နှာတော် ဦးလှည့်ရာ ဂျေရုဆလင်မြို.ရှိ ဝတ်ကျောင်းတော်ကို ဆိုသည်။
ဂျေရုဆလင်တွင် နဗီတမန်တော်များစွာ ပွင့်ခဲ့သဖြင့် မြတ်သောမြေမည်၏။ မုဟမ္မဒ်သခင်ကား ဂျေရုဆလင်သို့ ရောက်ဖူးခဲ့ခြင်း အလျဉ်းမရှိ။ အလ္လာဟ်အရှင်၏ အလိုတော်အရ ဤမြို. ကို မြင်တွေ့ ခွင့်ရသည်။ မိမိအလျင်က ပွင့်သွားခဲ့ကုန်သော တမန်တော်အဆူဆူကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ အောက်တွင် ဆန်းစစ်တင်ပြထားသော စူရာတော်ပါအတိုင်း မြောက်များစွာသော အခြင်းအရာ များကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ (လက်သည်းကွင်းအတွင်းရှိ ကိန်းဂဏန်းတို့မှာ ဤစူရာ ၁၇ လာ ပါဒတော် အမှတ်များကို ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
17@3 အို-အကြင်သူတို့၏ သားမြေးအပေါင်းတို့၊ ငါအရှင်မြတ်သည် ထိုသူတို့အား (နဗီတမန်တော်)နူဟ် နှင့်အတူ(သင်္ဘောပေါ်သို့)တင်ဆောင်တော်မူခဲ့လေသည်။ (အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကြလေကုန်။ မလွဲဧကန် ထို(နဗီတမန်တော်)နူဟ်သည် ကျေးဇူးတော်ကို အလွန်သိတတ်သော ကျွန်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပေသတည်း။
17@4 စင်စစ်သော်ကား ငါအရှင်မြတ်သည် အစ္စရာအီလီမျိုးနွယ်တို့ထံ(တောင်ရာတ်)ကျမ်းတော်၌ (ဤသို့)စီရင်ပြဋ္ဌာန်း(ချက်ကိုပေးပို့)တော်မူခဲ့လေသည်။ (အို-အီစ်ရာအီလီမျိုးနွယ်တို့၊) မုချစင် စစ် အသင်တို့သည် တိုင်းပြည်တွင် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကို ပြုလုပ်ကြပေမည်။ ထိုမှတစ်ပါး ဧကန်မလွဲ အသင်တို့သည် အကြီးအကျယ် ရက်စက်စွာအုပ်စိုး မှုဖြင့် လည်း အုပ်စိုးကြပေမည်။
17@5 တစ်ဖန် ထိုနှစ်ကြိမ်အနက် ပထမအကြိမ် (ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကို အသင်တို့ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြသည့်)အတွက် ချိန်းချက်ထားသော ပြစ်ဒဏ်(ကျရောက်ရန်အချိန်)သည် ဆိုက်ရောက် လာသောအခါ ငါအရှင်မြတ်သည် အလွန်အမင်း တိုက်ခိုက်ကြသော မိမိကျွန်များကို အသင်တို့အပေါ်ဝယ် နိုင်လိုမင်းထက် ပြုမူစေတော်မူပေမည်။ ထိုအခါ၎င်းတို့သည် (အသင်တို့အား ဖျက်ဆီးသတ်ဖြတ်ကြရန် အသင်တို့၏) နေအိမ်များအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကြပေမည်။ စင်စစ်သော်ကား(ငါအရှင်မြတ်၏ ဤချိန်းချက်မှုသည် မုချ) ပြီးမြောက် အောင်မြင် မည့်ချိန်း ချက်မှုပင် ဖြစ်ပေသတည်း။
17@4 and 17@8 (အို-အစ္စရာအီလီမျိုးနွယ်တို့) အသင်တို့ကို ဖန်ဆင်း မွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည် အသင် တို့အပေါ်၌ကရုဏာပြုကောင်းပြုတော်မူပေမည်။ သို့ရာတွင် အကယ်၍သာ အသင်တို့သည်(ရှေးနည်းတူ)မောက်မာပလွှားခြင်းတို့ကိုထပ်မံ၍ပြုခဲ့ကြသည်ရှိသော် ငါအရှင်မြတ်သည်လည်း (အသင်တို့အား ရှေးနည်းအတိုင်းပင်) ထပ်မံ၍ (ပြစ်ဒဏ်ပေးတော်မူခြင်း ကို) ပြုလုပ်ထားတော်မူမည်သာတည်း။ စင်စစ်တွင် မူကားငါအရှင်မြတ်သည် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံကို ကာဖိရ်သွေဖည် ငြင်းပယ်ကုန်သောသူတို့အဖို့ အကျဉ်းထောင်ပြုလုပ်ထားတော်မူချေတည်း။
17@9 ဧကန်မလွဲ ဤကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်သည်အဖြောင့်မတ်ဆုံးသော တရားလမ်းစဉ်ကို ညွှန်ကြား ပြသလေသည်။ ထို့ပြင် ယင်းကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် သည် ကောင်းမြတ်သော အကျင့်သီလများကို ကျင့်မူဆောက်တည်ကြကုန်သော မုအ်မင်န်သက်ဝင် ယုံကြည်သူတို့အား၊ ၎င်းတို့အဖို့ ကြီးကျယ်လှစွာသောအကျိုးဆုလာဘ်သည်ရှိသည်ဟူ၍ သတင်းကောင်း ပေးလေ သည်။
17@11 ၎င်းပြင် ဧကန်စင်စစ် နောင်တမလွန်ဘ၀ကိုမယုံကြည်သော သူတို့အဖို့ ငါအရှင်မြတ်သည် ပြင်း ပြနာကျင်ဖွယ်ဖြစ်သောပြစ်ဒဏ်ကို အဆင့်သင့် ပြုလုပ်ထားတော်မူသည် (ကိုလည်း ဤကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်သည် သတင်းပေး လေသည်။)
စင်စစ် လူသားများသည် အကောင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိတို့လျှောက်ထားပန်ကြားဘိသကဲ့သို့ပင် အဆိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း လျှောက်ထားပန်ကြားကြကုန်၏။ စင်စစ်သော်ကား လူသားတို့သည် (သဘာဝအလျောက်ပင်)အလွန် အလျင်လိုသူများ ဖြစ်ကြကုန် သတည်း။
17@12 ထုိ့ပြင် ငါအရှင်မြတ်သည် ညကိုလည်း ကောင်း၊နေ့ ကိုလည်းကောင်း၊ သက်သေလက္ခဏာ နှစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ထားတော်မူခဲ့လေသည်။ သို့ရာတွင် ငါအရှင်မြတ်သည် ည၏သက်သေ လက္ခဏာနှစ်ရပ်ကို မှေးမှိန်စေတော်မူ၍ နေ့၏သက်သေလက္ခဏာများကိုမူကား အသင်တို့သည် မိမိတို့အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ဆည်းပူး ရှာဖွေကြ အံ့သောငှာလည်းကောင်း၊ အသင်တို့သည် နှစ်များ၏အရေအတွက်နှင့်တွက်ချက်မှုကို သိရှိကြအံ့ သောငှာလည်းကောင်း၊ငါအရှင်မြတ်သည် စက္ခုကိုအလင်းပေးသော အရာ ပြု လုပ်တော် မူခဲ့လေသည်။ စင်စစ် သော်ကား ငါအရှင်မြတ်သည် (လိုအပ်သော) အရာ ခပ်သိမ်းတို့ကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဖော်ပြတော်မူခဲ့ပေသတည်း။
17@13 ထို့ပြင် ငါအရှင်မြတ်သည် လူတိုင်းလူတိုင်း၏အပြုအမူကို ၎င်း၏လည်ကုပ်တွင် ခိုင်မြဲစွာချည်နှောင် ထားတော်မူသည်။ ၎င်းပြင် ငါအရှင်မြတ်သည် ကိယာမတ်နေ့တွင်၎င်းအား မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ထုတ်ပေးတော်မူပေမည်။ ၎င်းသည် ထိုမှတ်တမ်းကို ပွင့်လျက်တွေ့ရှိရပေလိမ့်မည်။
17@21 ငါအရှင်မြတ်သည် ၎င်းတို့အနက် အချို့ကိုအချို့ထက် မည်သို့မည်ပုံ ထွတ်မြတ်စေတော်မူခဲ့ သည်ကိုအသင်သည်ရှုပါလေ။ အမှန်စင်စစ် နောင်တမလွန်ဘ၀သည် အဆင့်အတန်း အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထွတ်မြတ်မှုအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အလွန် ကြီးကျယ်လှပေသတည်း။
17@23 စင်စစ် အသင့်အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည် (ဤသို့)အမိန့်တော်စီရင်ချမှတ် ပြဋ္ဌာန်းတော်မူခဲ့လေသည်။ အသင်တို့သည် ထိုအရှင်မြတ်မှတစ်ပါးအခြား ကိုခ၀ပ်ကိုးကွယ် ရှိခိုးပူဇော်ခြင်း အလျှင်းမပြုကြရပေ။၎င်းပြင် မိဘနှစ်ပါးအား ကောင်းစွာပြုစု သဂြိုဟ်ထောက်ပံ့ကြရမည်။ အကယ်၍ ထိုမိဘနှစ်ပါးအနက် တစ်ဦးဦးသော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ဦးစလုံးသော်လည်းကောင်း၊ အသင် ၏ရှေ့မှောက်တွင် သက်ရွယ်ကြီးရင့် အိုမင်းခြင်းသို့ ရောက်ရှိလတ်သော်အသင်သည် ထိုမိဘနှစ်ပါးအား “အို” ဟူ၍ပင် မပြောဆိုလေနှင့်။ ထို့ပြင် အသင်တို့သည် ထိုမိဘနှစ်ပါးအား ငေါက်ငမ်းခြင်းကိုလည်းငေါက်ငမ်းခြင်းကိုလည်း မပြုလေနှင့်။ အသင်သည် ထိုမိဘနှစ်ပါး(နှင့်စကားပြောဆိုသောအခါ၎င်းတို့အား) ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ ရည်မွန်သောစကားကိုသာ ပြောဆိုပါလေ။
17@24 ၎င်းအပြင် အသင်သည် ထိုမိဘနှစ်ပါး၏ ရှေ့မှောက်တွင် ၎င်းတို့အပေါ်၌ ကရုဏာတရားထားရှိ သောအားဖြင့် ကျိုးနွံစွာရှိပါလေ။ ထို့ပြင် အသင်သည် (ထိုမိဘနှစ်ပါးနှင့်ပတ်သက်၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အထံတော်၌) အို-ကျွန်တော်မျိုးအား ဖန်ဆင်းမွေးမြူ တော်မူသောအရှင်၊ ထိုမိဘနှစ်ပါးသည်ကျွန်တော် မျိုးအား ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀၌ ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ကြ သကဲ့ သို့ ပင် အရှင်မြတ်သည်လည်း ၎င်းတို့နှစ်ပါးအပေါ်၌ ကရုဏာပြုတော်မူပါဟု လျှောက်ထားပန်ကြားပါလေ။
17@25 အသင့်အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့၏စိတ်နှလုံးများ၌ ရှိသည် တို့ကို ကောင်းစွာသိတော်မူသော အရှင်မြတ်ပင် ဖြစ်တော်မူ၏။ အကယ်၍အသင်တို့ သည် အမိန့်တော်ကို လိုက်နာသူများ (သူတော်စင်များ)ဖြစ်ကြပါလျှင် ဧကန်မလွဲ ထိုအရှင်မြတ်သည်လည်း ၀န်ချတောင်းပန် သူတို့အဖို့ အလွန်တရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး သနားတော်မူသော အရှင်မြတ်ပင် ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။
17@26 ထိုမှတစ်ပါး အသင်သည် ဆွေမျိုးနီးစပ်သူအား၎င်း၏ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးကို ပေးပါလေ။ (ထို့ပြင်သူဆင်းရဲအားလည်းကောင်း၊ ခရီးသည်အား လည်းကောင်း၊ (ယင်းတို့ရ သင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများကိုပေးပါလေ)။ သို့ရာတွင် အသင်သည်(မိမိဥစ္စာပစ္စည်းများကို)အလဟဿမဖြုန်းတီးလေနှင့်။
17@27 ဧကန်မလွဲ အလဟဿဖြုန်းတီးသူတို့သည်ရှိုင်တွာန်မိစ္ဆာကောင်၏ ညီသားအစ်ကိုများပင် ဖြစ်ကြကုန်သည်။ စင်စစ် ရှိုင်တွာန်မိစ္ဆာကောင်သည် မိမိကို ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်အား အလွန် ကျေးဇူးကန်းသူပင်ဖြစ်ချေသတည်း။
17@28 သို့ရာတွင် အကယ်၍ အသင်သည် မိမိအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အထံတော်မှ ကရုဏာတော်ကို စောင့်မျှော်နေခိုက် ၎င်းတို့အား လျစ်လျူရှုရပါလျှင်အသင်သည် ၎င်းတို့အား ပြေပြစ်သာယာသော စကားကိုပြောဆိုပါလေ။
17@29 ထိုမှတစ်ပါး အသင်သည် မိမိလက်ကို မိမိလည်ကုပ်တွင် တုပ်နှောင်ပြီးမထားလေနှင့်၊ ထိုနည်းတူစွာအသင်သည် ယင်းလက်ကို လုံးဝ ဖွင့်၍လည်း မထားလေနှင့်။သို့ပြုခဲ့လျှင် အသင်သည် ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံရလျက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲလျက်၊ ထိုင်၍နေရချိမ့်မည်။
17@30 ဧကန်စင်စစ် အသင့်အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်သည် မိမိအလိုရှိတော်မူသောသူအားရိက္ခာကို တိုးချဲ့၍ပေးသနားတော်မူ၏။ ထိုနည်းတူစွာ ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင် (မိမိအလိုမရှိတော်မူသောသူအား ရိက္ခာကို) ကျဉ်းကျပ်စေတော်မူလေသည်။ ဧကန်မလွဲ ထိုအရှင်မြတ်သည် မိမိကျွန်များ၏(အခြေအနေ)ကို အလွန်တရာ သိတော်မူသောအရှင်၊ အလွန်တရာမြင်တော်မူသောအရှင်၊ ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။
17@31 ၎င်းပြင် အသင်တို့သည် စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုကို စိုးရိမ်သောကြောင့် မိမိတို့၏သားသမီးများအား မသတ်ဖြတ်ကြကုန်လင့်။ (စင်စစ်) ငါအရှင်မြတ်သည် ပင်လျှင်ယင်းတို့အား လည်းကောင်း၊ အသင်တို့အား လည်းကောင်း၊စားနပ်ရိက္ခာ ချီးမြှင့်ပေးသနားတော် မူပေသည်။ ဧကန်မလွဲ၎င်းတို့အား သတ်ဖြတ်ခြင်းကား အလွန်ကြီးလေးသော ပြစ်မှုပင် ဖြစ်ချေသတည်း။
17@32 ထို့ပြင် အသင်တို့သည် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ၏အပါးသို့ပင် မချဉ်းကပ်ကြကုန်လင့်။ ဧကန်မလွဲ ယင်းကာမေသုမိစ္ဆာစာရသည် အလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် ဖြစ်သည့်ပြင်အလွန် ဆိုးဝါး လှသော လမ်းစဉ်လည်း ဖြစ်ပေသတည်း။
17@33 ၎င်းပြင် အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က တားမြစ်ပညတ်ထားတော်မူသော အသက်ဇီဝိန်ကို မှန်ကန်သော အကြောင်းမရှိဘဲလျက် သတ်ဖြတ်ခြင်း မပြုကြရချေ။ စင်စစ်သော် ကား မတရားသဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရသောသူ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသောအမွေစားအမွေခံအား ဧကန်စင်စစ်ငါအရှင်မြတ်သည် အခွင့်အာဏာကို ချီးမြှင့်၍ထားတော်မူ ခဲ့လေ သည်။ သို့ရာ တွင် ယင်းအမွေစားအမွေခံသည် သတ်ဖြတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းကို မကျူးလွန်ရချေ။ အကြောင်းသော်ကား ထိုအမွေ စားအမွေခံသည် (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ၏) ကူညီထောက်ခံ မှုကို ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပင်တည်း။
17@34 ထိုမှတစ်ပါး အသင်တို့သည် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမှတစ်ပါး အဖမဲ့ကလေးသူငယ်များ၏ ဥစ္စာ ပစ္စည်း၏အပါးသို့ပင် ၎င်းတို့ လူလားမြောက် အရွယ် ရောက်သည် အထိမချဉ်း ကပ်ကြ ကုန်လင့်။ ထို့ပြင် အသင်တို့သည်(မိမိတို့ အချင်းချင်းတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ထားရှိကြသော) ပဋိညာဉ်ကတိသစ္စာကို ကျေပွန်စွာဆောင် ရွက်ကြလေ ကုန်။ ဧကန်စင်စစ် ယင်းပဋိညာဉ် ကတိသစ္စာသည် စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရမည့် အမှုကိစ္စပင်ဖြစ်ချေသတည်း။
17@35 ၎င်းပြင် အသင်တို့သည် (မိမိတို့ရောင်းချသောဝတ္ထုပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာကို) တောင်း၊ တင်း၊ ခွက် (စသည့်ပမာဏ(ဖြင့်) ခြင်တွယ်၍(ရောင်းချ) သောအခါဝယ် အပြည့်ခြင် တွယ်၍ပေးကြလေ ကုန်။ ထိုမှတစ်ပါး အသင်တို့သည်(အလေးချိန်ခွင်ဖြင့် ချိန်တွယ်၍ ရောင်းချသောအခါတွင်လည်း)မှန်ကန်သော (အလေး)ချိန်ခွင်ဖြင့် ချိန်တွယ်(၍ပေး)ကြလေ ကုန်။ ဤသည်ကား (အသင်တို့အဖို့ ဤပစ္စက္ခမျက်မှောက်ဘ၀၌လည်း)အမွန်မြတ်ဆုံးပင်ဖြစ်ပေသည်။ (နောင်တမလွန်ဘ၀၏) အကျိုးဆက်အားဖြင့်လည်း အကောင်းဆုံးပင် ဖြစ်ချေ သတည်း။
17@36 ထို့ပြင်တစ်ဝအသင်သည်မိမိမသိသောအကြောင်းအရာ၏ နောက်သို့ မလိုက်လေနှင့်။ ဧကန်မလွဲ နား၊ မျက်စိ၊စိတ်နှလုံး ဤအသီးသီးတို့သည် ၎င်းအသီးသီးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းကို ခံရမည်သာတည်း။
17@37 ၎င်းပြင် အသင်သည် ပထ၀ီမြေပြင်ဝယ် ဟိတ်ဟန်ထုတ်၍ မလျှောက်လေနှင့်။ ဧကန်စင်စစ် အသင်သည်(ယင်းသို့လမ်းလျှောက်ခြင်းအားဖြင့်)ပထ၀ီမြေကိုလည်းအလျင်းထွင်းဖောက် (ခွဲ) နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုမှတစ်ပါးအသင်သည် မိမိကိုယ်လုံးကိုယ်ရပ် မြင့်မားခြင်းဖြင့် တောင်များကိုလည်း အလျင်းမီနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။
17@38 ဤ(အမိန့်ပညတ်) အသီးသီးတို့အနက် မကောင်းမှုတို့မှာ အသင့်အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်အထံတော်တွင် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်များ ပင် ဖြစ်ကုန်သတည်း။
17@39 ဤသည်တို့ကား အသင့်အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည် ဥာဏ်ပညာများအနက်မှ အသင့်ထံသို့ ထုတ်ပြန်တော်မူသော အမိန့်ပညတ်တော် များပင်ဖြစ်ကုန်၏။ သို့ဖြစ်ရာ အသင်သည် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်နှင့် ယှဉ်တွဲ၍အခြားကိုးကွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာကိုမျှ (တွဲဖက်ကိုးကွယ်ခြင်းကို)မပြုလေနှင့်။ သို့ပြုခဲ့သော် အသင်သည် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ၌ ပြစ်တင် ရှုတ်ချခြင်းခံရလျက်၊ ကရုဏာတော်မှ ကင်းဝေးစေခြင်းခံရလျက် ပစ်ချခြင်းခံရအံ့သတည်း။
ယင်းနောက်တွင် တမန်တော်မြတ်အား စကြဝဋာတစ်ခုလုံးသည်လည်း တစ်ခုတည်းသော ဥပဒေသ (အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလိုတော်) ကို နာခံမပျက်ရှိနေကြောင်းနှင့် အနုမြူတစ်ခုချင်းကို မဆိုထားဘိ၊ ယင်းတွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အရာတို့သည်ပင်လျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဂုဏ် ကျေးဇူးတော်အစုံကို ချီးကျူးမပျက်ရှိနေကြောင်းကို ပြသတော်မူသည်။
17@42 (အို-နဗီတမန်တော်)အသင်သည်(ဤသို့)ပြောကြားပါလေ။ အကယ်၍သာ ယင်း(မုရ်ှရစ်က်)တို့ ပြောဆိုသည့်အတိုင်း ထို(အလ္လာဟ်)အရှင်မြတ်နှင့်အတူ အခြား ကိုးကွယ်ရာများ လည်း ရှိကြပါလျှင် ဧကန်မလွဲ ၎င်းတို့သည် အရ်ရ်ှပလ္လင်တော်ကိုစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်အထံတော်သို့(သွားရောက်တိုက်ခိုက်ရန်) နည်းလမ်းရှာဖွေခဲ့ကြပြီး ဖြစ်အံ့သ တည်း။
17@43 ထိုအရှင်မြတ်သည် စင်ကြယ်သန့်ရှင်းတော် မူ၏။၎င်းပြင် ထိုအရှင်မြတ်သည် ယင်း(မုရ်ှရစ်က်)တို့ ပြောဆို(စွပ်စွဲ)ကြသည်တို့ထက်သာလွန်ထူးကဲ မြင့်မြတ်လှတော်မူပေသတည်း။
ဤသို့တမန်တော်မြတ်အနေနှင့် မိမိ၏ အမြင်အရ စကြဝဋာကြီးတစ်ခုလုံးကို အလ္လာဟ်ရှင် တစ်ပါးတည်းကသာလျှင် မည်သည့်ကူညီဖော်၊ လုပ်ဆောင်ဖော်၊ ယှဉ်ပြိုင်ဖက်များမှ အလျဉ်း မရှိဘဲ စေစားထားတော်မူကြောင်းကို သိသွားခဲ့ရသည်။ အခြားယှဉ်ဘက်ရှိပါက အလ္လာဟ်ရှင်ကို တိုက်ခိုက်ခြင်းပြုလာကြမည်။ အလ္လာဟ်ရှင်မှအပ အခြားတုပရာမရှိ။
ဤသည်တို့မှာ အစ္စလာမ့်အခြေခံဖြစ်ပြီး မွတ်စလင်မ်မှန်က ဤအတိုင်းခံယူထားကြသည်။ မယုံကြည်သူများအနေနှင့် မိမိပြုလိုရာကို ပြုနိုင်ကြပါသည်။ အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလိုတော်က မူ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ။ အချိန်မကျသေးသရွေ. အကြောင်းမပြသေးပေ။ မြတ်တမန်ကား ငြင်းပယ် သူတို့ဘက်မှ အလ္လာဟ်မှအပဖြစ်သော အခြားကိုးကွယ်ရာတို့ကို မစွန့်ကြခြင်း အတွက် ဝမ်းနည်းမဆုံး ရှိရှာခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်ရှင်က မြတ်တမန်ကိုမူ ပြသအပ်ရာ အဖြာဖြာကို ပြသတော်မူခဲ့သည်။
17@44 မိုးခုနစ်ထပ်သည်လည်းကောင်း၊ ပထ၀ီမြေသည်လည်းကောင်း၊ ထိုမိုးများနှင့် ပထ၀ီမြေ၌ရှိသူတို့သည် လည်းကောင်း၊ ထိုအရှင်မြတ် စင်ကြယ်သန့်ရှင်းတော်မူကြောင်း ပွားများသရဇ္ဈာယ်လျက်ရှိကြကုန်၏။ အမှန်စင်စစ်(သက်ရှိသက်မဲ့)အရာဝတ္ထုအလုံးစုံတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်အား ချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းနှင့်တကွ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းတော်မူကြောင်း ပွားများသရဇ္ဈာယ်လျက်ပင်ရှိကြကုန်သည်။ သို့ရာတွင် အသင် တို့မှာမူကား ၎င်းတို့၏ ပွားများသရဇ္ဈာယ်မှုကို နားမလည်ကြချေ။ဧကန်စင်စစ် ထိုအရှင်မြတ်သည် အလွန်တရာ သည်းခံတော် မူသောအရှင်၊ အလွန်တရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသနားတော်မူသော အရှင်မြတ်ပင် ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။
ဤသို့အရေးပါလွန်းလှ၍လည်း တမန်တော်မြတ်မှာ မေအ်ရာဂ်ျခရီးကိုမြန်းကြွခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသူတို့အား အလ္လာဟ်ရှင်က ချီးမြှင့်ခဲ့သော နာမ်ရေးရာ အဆင့်ထက်ပိုပြီး မနှိုင်းသာအောင် မြင့်မားလွန်းသော အဆင့်ထိတိုင် တမန်တော်မြတ်မှာ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤသို့အဆင့်အမြင်ရခဲ့ရာက တစ်နေ့လျှင် ဆွလားသ် ငါးကြိမ်ဝတ်ပြုရန် ပညတ်ချက်ကိုပါ ရလာခဲ့သည်။ ထို့အလျင်ကမူ နံနက်ခင်းနှင့် ညနေခင်းတွင်သာ တမန်တော်မြတ်မှာ ဝတ်ပြုခြင်း ရှိခဲ့သည်။
17@78 (အို-နဗီတမန်တော်) အသင်သည် နေမွန်းလွဲချိန်မှစ၍ ညဥ့်မှောင်ချိန်အထိ ဆွလာတ်ဝတ်ပြုမှုကို ဆောက်တည်ပါလေ။ ၎င်းပြင် မိုးသောက်ချိန် ဆွလာတ်ဝတ်ပြုမှုကို ဆောက် တည်ပါလေ။ ဧကန်မလွဲ မိုးသောက်ချိန် ဆွလာတ်ဝတ်ပြုမှုသည် (မလာအိကဟ် ကောင်းကင်တမန်များ) လာရောက်ချိန်ပင် ဖြစ်ချေသတည်း။
ပထမပိုင်းတွင် ပြဆိုသော အချိန်ပိုင်းတွင် မွန်းတည့်၊ မွန်းလွဲ၊ ညနေခင်းနှင့် ညပိုင်းဝတ်ပြုမှုတို့ အကျုံးဝင်သည်။ နံနက်ခင်းတွင် ကုရ်အာန်ဖတ်ဆိုခြင်းက နံနက်ယံဝတ်ပြုကို ဆိုသည်။ ယင်းအလျင် ကမူ နံနက်နေ မထွက်ခင်နှင့် ညနေနေဝင်ပြီးပြီးချင်း အချိန်တို့တွင်သာ ဝတ်ပြုရသသည်။ နောက်ပိုင်းကျမှ ဝတ်ပြုချိန်သုံးကြိမ်ထပ်တိုးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မေအ်ရာဂ်ျ (ဝါ) ကောင်းကင်ယံ ခရီးစဉ်ကား အလ္လာဟ်ရှင်နှင့် အရှင်၏ တမန်တော်များ၏ ကိစ္စ သာလျှင်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်တိုင်းတွင် မိမိအရည်အချင်းအလိုက် မေအ်ရာဂ်ျကိုယ်စီ ရှိကြသည်။ ဤမျှမြင့်မားလှသောသိရခက်ခဲလှသော နာမ်ရေးရာအကြောင်းရင်းတွင် လူသားတို့အနေနှင့် ဝိဝါဒကွဲ ငြင်းခုံနေစရာအကြောင်းမရှိပါ။ ကုရ်အာန်တွင်ဆိုထားသမျှ အကြောင်းရပ် များအပေါ်၊ စကားလုံးအပေါ်တွင် အကျအနလိုက်ကောက်နေကြမည်ဆိုလျှင်မူ ယင်းတင်ပြချက် အလှအပနှင့် အနှစ်သာရတို့ကို မကြာမီမှာပင် မျက်ခြေပြတ်သွားကြ မည် ဖြစ်သည်။ ကုရ်အာန်ကို စကားလုံးအရ အနက်ကောက်ခြင်းဖြင့် လှပပြောင်မြောက်စွာ တင်စား ဖွဲ့နွဲ့ချက်များမှာ အလှပျယ်သွားကာ လူတို့ဥာဏ်နှင့် ရေးသီရာကျမ်းတို့ထက်ပင် ပိုမိုဆိုးရွားရာ နှင့် အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ရာသို့ ရောက်သွားစေနိုင်ပါသည်။
ကဏ္ဍ ၅၃ ၌ မေအ်ရာဂ်ျ နှင့်ပတ်သက်ပြီး လာရှိထားသမျှကား အထူးတလည်မြင့်မြင့်မားမား ပုံဆောင် ဆိုထားချက်များသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။
(ငါအရှင်မြတ်သည်) ကြယ်တာရာကို သက်သေထူတော်မူ၏။ အကြင်အခါဝယ် ထိုကြယ်တာရာသည် ကွယ်ပျောက်၍သွားလေ၏။
အသင်တို့၏အဖော် (တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်)သည် လမ်းလွဲနေသည်လည်း မဟုတ်ပေ။ လမ်းမှားကို လိုက်ခဲ့သည်လည်း မဟုတ်ပေ။
ထိုမှတစ်ပါး ထိုအဖော် (တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်)သည် (မိမိ)စိတ်အလိုဆန္ဒအရ စကားပြောဆိုလေ့ရှိသည်လည်း မဟုတ်ပေ။
ယင်းပြောဆိုမှုကား (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အထံတော်မှ) ထုတ်ပြန်ခြင်း ခံရလေသော ထုတ်ပြန်ချက် သာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
(အသင်တို့၏) ထိုအဖော်အား အလွန်အားအင်ကြီးမားသူ (ကောင်းကင်တမန်)သည် သင်ကြားပို့ချ၍ ပေးခဲ့လေ၏။
စွမ်းအင်နှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်သော လွန်စွာလှပတင့်တယ်သူဖြစ်သော၊ ထို့နောက် ထို(ကောင်းကင် တမန်)သည်နဂိုမူလ ရုပ်သဏ္ဌာန်နှင့် အထင်အရှား ပေါ်လာခဲ့၏။
ထိုစဉ်အခါဝယ် ထို(ကောင်းကင်တမန်)သည်မြင့်စွင့်လှစွာသော မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း၌ ရှိနေခဲ့၏။
ထို့နောက် ထို(ကောင်းကင်တမန်)သည် ချဉ်းကပ်၍ လာခဲ့၏။ ထို့နောက်တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ချဉ်းကပ်ခဲ့ပေရာ။
လေးနှစ်ပြန်မျှသာ ဝေးကွာလေတော့၏။စင်စစ် ထို့ထက်ပင် ပို၍ နီးကပ်စွာရှိခဲ့လေ၏။
ထိုအခါ ထိုအရှင်မြတ်သည် မိမိ၏ကျွန်(မုဟမ္မဒ်)ထံသို့ မိမိထုတ်ပြန်(လိုသော)ထုတ်ပြန်ချက် များကို ထုတ်ပြန်တော်မူခဲ့လေ၏။
(ထိုအသင်တို့အဖော်၏)စိတ်နှလုံးသည် တွေ့မြင်ခဲ့သော အရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှားယွင်းခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
သို့ပါလျက် အသင်တို့သည် ထိုအဖော်နှင့် ၎င်းတွေ့မြင်ခဲ့သောအရာများတွင် အငြင်းအခုံ ပြုနေကြလေသလော။
ထိုမှတစ်ပါး ထိုအဖော်သည် ထို(ကောင်းကင်တမန်)အား ဒုတိယအကြိမ် ဆင်းသက်ရာ၌ မုချဧကန်တွေ့မြင်ခဲ့၏။
နယ်စွန်နယ်ဖျား၌ရှိသော ဆီးပင် ‘စစ်ဒ်ရတုလ်မွန်တဟာ’ ဆီးပင်၏အနီးတွင်။
ယင်းဆီးပင်၏ အနီး၌ပင် ‘ဂျန္နတုလ်မအ်ဝါ’သုခဘုံ ရှိ၏။
အကြင်အခါဝယ် ဆီးပင်ကို ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသောအရာများသည် ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိ၏။
(ထိုအဖော်၏) မျက်စိသည် သွေချော်ခဲ့သည်လည်းမရှိချေ။ ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်လည်း မရှိချေ။
ဧကန်မလွဲ ထိုအဖော်သည် ၎င်းအား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်၏ ကြီးကျယ်လှစွာသော သက်သေလက္ခဏာတော်များကို တွေ့မြင်ခဲ့သည်မှာ အမှန်ပေတည်း။
ဤပြန်ဆိုချက်မှာ စာရေးသူလွန်ခဲ့သော နှစ်အချို.အတွင်းက ပြုစုခဲ့သော ကုရ်အာန် ဘာသာပြန်မှ ယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာရှုသူများ အနေနှင့် ဤစာပိုဒ်များကို အသေအချာဖတ်ရှုပါ။ ယင်းနောက် အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပါ ဖတ်ရှုပြီး အလေးအနက် စဉ်းစားခြင်းပြုပါ။ ဋီကာဖွင့်ချက်မှာလည်း စာရေးသူ မူပိုင်ဖြစ်ပြီး မည်သူ ထံကမှ မှီးထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ တူညီချက်များ ရှိနေပါက တိုက်ဆိုင်မှုဟုသာ မှတ်ယူပါ။ ယင်း ဋီကာကို ဖတ်ရှုပြီးပါက မူလက ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေသည့် ပဟေဠိဆန်လှသော အချက်အလက်များ အပေါ် အတော်အတန်ပင် ရှင်းလင်းသွားနိုင် စရာရှိပါသည်။
ပါဒ (၁) တွင် အလ္လာဟ်ရှင်က တမန်တော်မြတ်အား လူတို့ထံတွင် ဝင်တော့မည့် ကြယ်တာရာကြီး တစ်ခုနှင့် နှိုင်းပြီးဆိုထားသည်။ ကြယ်မှာဝင်သွားပြီဆိုက လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားခြင်း ရှိပါသလား။ ကြယ်ဝင်ချိန်တွင် ကြယ်မှာ မူလလမ်းကြောင်းက သွေဖီသွားခြင်း ရှိပါသလား။ အနည်းငယ်စဉ်းစားရုံမျှဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင် ဥာဏ်ကြီးရှင်အနေနှင့် ဤသို့ လုံးဝ ဖြစ်မသွားခြင်း ကို မြင်နိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ၏လှည့်ပတ်မှုကြောင့်သာ ကြယ်ကို ကွယ်သွားသည်သို့ ထင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကြယ်ကမူ မိမိပိုင်လမ်းကြောင်းတွင် တစ်သမတ်တည်း ရှိနေသည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိအား သတ်မှတ်ထားသည့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဝင်ရသည်။ ထွက်ရသည်။ ကမ္ဘာကလည်း မိမိကိုယ်ဝန်ရိုးပေါ်တွင် လည်ပတ်ခြင်းပြုသည်။ မိမ်ိပတ်လမ်းကြောင်း အတိုင်း နေကိုလှည့်ပတ်ပြီးနေ သည်။
တမန်တော် မုဟမ္မဒ်မှာလည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်မှာ ကွယ်သွားခြင်း သွေဖီသွားခြင်း မရှိချေ။ ကြယ်တာရာပမာကဲ့သို့ မိမိဘဝလမ်းကြောင်း မပျက် ကြံ.ကြံ.ခံရပ် တည်ခဲ့ သည်။ (ပါဒ- ၂ )
ကြယ်၏လှုပ်ရှားမှုသာမက ကမ္ဘာ၏လှုပ်ရှားမှုကလည်း မိမိတို့သဘောနှင့် မိမိတို့ပြုနေခြင်း မဟုတ်ချေ။ အလ္လာဟ်ရှင်က တင်ကူးသတ်မှတ်ပြီး ဥပဒေသအတိုင်း လည်ပတ်နေကြရသည်။ အလ္လာဟ်ရှင်၏ ထံတော်မှ တမန်တော်မြတ်၏ သတင်းစကားကလည်း အလားတူပင် ဖြစ်သည်။ မိမိဆန္ဒဖြင့် မိမိအလိုအရ ပြောရဆိုရခြင်းမဟုတ်ချေ။ သူ့ထံပို့ချခံရခြင်းသာလျှင် ဖြစ်သည်။ (ပါဒ ၃ နှင့် ၄ ) ကြယ်ရွေ.လျားခြင်းနှင့် ကမ္ဘာရွေ.လျားခြင်းနည်းတူပင် ဝဟီကျခြင်း မှာလည်း အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ဖြစ်ပျက်ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မုဟမ္မဒ်သခင်အား မည်သူ၏ အလိုတော်ကြောင့် ကုရ်အာန်ကို သင်ကြားပေးရခြင်းနည်း။ ကြယ်တို့မှာ အလ္လာဟ်ရှင်၏ ဥပဒေသနှင့်အညီ ရွေ.လျားရသည့်ပုံနှယ်ပင် အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလိုတော်ကြောင့်သာလျှင် သွန်သင်ပေးခဲ့ရခြင်းဟူလို။ အနန္တစွမ်းအားတော်ရှင်က တမန်တော်မြတ်အား ကုရ်အာန်ကို သင်ကြားပေးတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (ပါဒ ၅ ) ကဏ္ဍ ၅၅ အဖွင့်ပါဒများတွင် ဆိုထားချက်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
“အာရ်ရဟမန်၊ အလွန့်အလွန်သနားကြင်နာတော်မူသော အရှင်သည်ပင် ကုရ်အာန်ကို သင်ကြားပေးတော်မူခြင်း ဖြစ်သတည်း”။ ဤအတွက်ကြောင့် မေအ်ရာဂ်ျ၏ ပထမဆုံး ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗျာဒိတ်တော်လာခြင်းကို လက်ခံယူခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အလ္လာဟ်ရှင်က ကုရ်အာန်ကို ထုတ်ဆင့်ပေးရာ၌ မက္ကာမြို.ရှိ မည်သည့်နတ်ဘုရားများ၏ အကူအညီသော်မျှ မပါရှိချေ။ အလ္လာဟ်ရှင်ကား အနန္တစွမ်းအားတော်ရှင်တည်း။ အလ္လာဟ်ရှင်ကား ကြံ့ခိုင်မပျက်၊ ဧရာမ စွမ်းအားတော်ရှင်လည်း ဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ ပကတိတည်နေမပျက် ရှိတော်မူသည်။ (ပါဒ ၆ )
ကြယ်တာရာတို့၏ သဘာဝကို မပြောင်းလဲစေသည့် ပမာပင်တည်း။ အမိန့်ပေးတော်မူခြင်းနှင့် မိုးကောင်းကင်များနှင့် မြေကမ္ဘာကို အုပ်စိုးရခြင်းတွင်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ အလ္လာဟ်ရှင်ကား နိစ္စအမြဲတည်တော်မူ၏။ အရှင်၏ စွမ်းအားတော်သည်လည်း ချို.တဲ့ခြင်း အလျဉ်းကင်းတော်မူသည်။ ပကတိပြီးပြည့်စုံမှု ရှိတော်မူသည်။ အရှင်၏ စွမ်းအားတော်သည်လည်း ချို.တဲ့ခြင်း အလျဉ်းကင်းတော်မူသည်။ ပကတိပြီးပြည့်စုံမှု ရှိတော်မူ၏။ အရှင်၏ စွမ်းအားတော်ကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကြယ်တာရာအနေနှင့် အထွန်းလင်းဆုံးသို့ ရောက်သည့်ပမာနှယ် တူဘိ သည်။ (ပါဒ ၇ )
မြတ်တမန်မှာ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြင့်မားဆုံးသော အသိပညာအဆင့်သို့ကို မြှင့်တင်ပေးတော်မူခြင်းကို ခံယူခဲ့ရသည်။ သူ့အား အလ္လာဟ်အရှင်က အပါးတော်ဝယ်ခစားစေ သည်။ ရှေ.တော်မှောက် ဝယ် ဦးညွှတ်ခစားစေတော်မူသည်။ မိမိကိုယ်မိမိ မာနမထောင်၊ မိမိ၏စွမ်းဆောင်ချက်များအပေါ် ကြွားဝါခြင်းလည်းမပြု၊ မိမိ၏ စွမ်းအား ချိနဲ့လှပုံကို အရှင့်ထံတင်ပြ အသနားခံသည်။ မိမိ၏ ပါးလျားလှပုံကို လျှောက်ထားပြသည်။ အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလိုတော်အောက်ဝယ် ကျိုးညွတ်ခစားပြီး နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဆိုသလိုပင် “အလ္လာဟ်ရှင်ကား ချို.တဲ့ခြင်းကင်း၏ ချီးမွမ်းခြင်းတည်ရာဖြစ်၏ ကျွန်တ်ာမျိုးအနေနှင့် အရှင့်ထံပါးမှ ခွင့်လွတ်ချမ်းသာကို တောင်းခံပါ၏” ဟူ၍သာလျှင် ကျူးရင့်မပျက် ရှိနေရှာသည်။
မိမိ၏ အတ္တအလိုကိုပယ်ပြီး အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလိုတော်ဝယ် ဦးခိုက်လိုက်ခြင်းဖြင့် သူသည် အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလိုတော်နှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်သွားတော်မူ သည်။ လေးကိုင်းနှစ်ခု အား ကွေးညွတ်ထိဆက်လိုက်ပါက စက်ဝိုင်းပုံကိုရသည်။ ကောင်းကင်ထက်ရှိ ကြယ်တာရာမှာ အလ္လာဟ်ရှင်က ပြဌာန်ထားချက်အတိုင်း ရွေ.လျားလည်ပတ်ရသည်။ မုဟမ္မဒ်သခင်မှာလည်း အလားတူပင် လှုပ်ရှားရသည်။ (ပါဒ ၈ နှင့် ၉ )
ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့် မြတ်တမန်မှာ အလ္လာဟ်ရှင်နှင့် အစဉ်တစ်ဆက်တစ်သားတည်း ဆက်စပ်မပျက် ရှိသွားရသည်။ အရှင်၏ ပညတ်တော်များကို အစဉ်တစ်ဆက် ရရှိခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်ရှင်က ဗျာဒိတ်ပြုရန်ရှိသည်တို့ကို ခံယူနိုင်သွားခဲ့သည်။ (ပါဒ ၁၀)
အလ္လာဟ်ရှင်အနေနှင့် မိမိဗျာဒိတ်ပြုလိုရာကို ပြုနိုင်တော်မူသည်သာ။ သို့သော် တမန်တော်မြတ်နှင့် ပတ်သက်၍မူ အသို့ဖြစ်ပါသနည်း။ သူ့ထံပါးတွင် အလ္လာဟ်ရှင်က ပညတ်သမျှကို စွမ်းနိုင် ရည်ရှိပါ သလော။ မိမိအား ဆင့်ဆိုသမျှအပေါ် သံသယထားခြင်း ရှိပါသလော။ အလ္လာဟ်ရှင်အနေနှင့် မဟုတ်မတရားစွပ်စွဲသူများ၏ ရန်မှ တမန်တော်မြတ်အား လွတ်ကင်းစေတော် မူသည်။ မိမိမြင်ထားသမျှနှင့်အညီ မုဟမ္မဒ်သခင်၏ နှလုံးသားကား မှန်ကန်မပျက်ရှိသည်။ (ပါဒ ၁၁) အခြေအတင်ငြင်းခုံလိုသူတို့ကမူ သူမြင်သမျှကား အမှားအယွင်းသာတည်းဟု ယိုးစွပ် ခဲ့ကြသည်။ (ပါဒ ၁၂)
မုဟမ္မဒ်သခင်၏ နှလုံးသားဟု ဆိုထားချက်တွင် အတွင်းအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားအဝဝကို ဆိုခြင်းဖြစ်ရာ ယင်းစွမ်းအား အစုစုတည်ရာကိန်းဝပ်ရာသည်ပင် နှလုံးသားမဟုတ်ပါသလော။
မုဟမ္မဒ်သခင်၏ အမြင်ကို ယင်းကအပြီးတိုင်စေသည်။ မုဟမ္မဒ်သခင်၏ နာမ်ဝိညာဉ်ကား အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလိုတော်နှင့် တစ်သားတည်းဟု ဆိုသည်။ သံသယအဝဝနှင့် ချို.တဲ့မှု ခပ်သိမ်းနှင့် ကင်းစင်ရာအထွတ် အထိပ်အဆင့်နှင့် စွမ်းအားတော်ကို ရယူနိုင်ခြင်းမည်သည်။ ဤဝိညာဉ်တော်ကား အလ္လာဟ်ရှင်၏ အပါးဝယ်ခံစားမပျက် ရှိနေ၏။ မည်မျှပင် အဆင့် အားဖြင့် မြင့် လင့်ကစားလည်း အလ္လာဟ်အရှင့်အဖို့ရာ အမှန်အကန်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ သင်္ဘောသားများအနေနှင့် မှောင်နေသော အဏ္ဍဝါအတွင်း ဝယ် ကောင်းကင်ထက်ရှိကြယ်တာရာတို့ ဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းနှင့် အမြင့်ဆုံးအခြေသို့တိုင်ခြင်းကို ကြည့်ပြီး လမ်းကို ရှာရသကဲ့သို့ လူသားတို့အနေနှင့်လည်း ယင်းဝိညာဉ်တော်၏ အလင်းရောင်နှင့် လမ်းညွှန်တော်ကို ခံယူရမည်။ ကြယ်တာရာ တို့ကား လမ်းကြောင်းအမှားကို လုံးဝမပြသလို၊ တမန်တော်မြတ်မှာလည်း မှားသောလမ်းစဉ်ကို ဘယ်သောအခါမျှမပြ။ မိမိ၏ လမ်းစဉ်တွင် ပကတိမှန်ကန်မှုမပျက် ရှိတော်မူသည်။ တစ်သမတ်တည်း လမ်းညွှန် တော်မူသည်။
(ငါအရှင်မြတ်သည်) ဥာဏ်အမြော်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော (ဤ)ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကို သက်သေထူထောင်တော်မူသည်။
မလွဲဧကန် အသင်သည် ရစူလ်တမန်တော်အပေါင်းတို့တွင် အမှန်ပင် တစ်ပါး အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
ဖြောင့်မတ်သော တရားလမ်းပေါ်၌ တည်ရှိနေပေသည်။
ထိုနည်းအတိုင်းပင် ငါအရှင်မြတ်သည် မိမိအမိန့်တော်များအနက်မှ ရူဟ်တည်းဟူသော ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကို ထုတ်ပြန်တော်မူခဲ့၏။ အသင်သည် ကျမ်းဂန်ဒေသနာတော်ဟူသည် အဘယ်နည်းဟူ၍ လည်းကောင်း၊အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုဟူသည် အဘယ်နည်းဟူ၍လည်းကောင်း၊ သိရှိခဲ့သည်မဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် ငါအရှင်မြတ်သည်ယင်းကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ် ကို လင်းရောင်ခြည်ပြုလုပ်တော်မူ၍ ထိုလင်းရောင်ခြည်ဖြင့် ငါအရှင်မြတ်သည် မိမိကျွန်တို့ အနက်မှ မိမိအလိုရှိတော်မူသောသူအား တရားလမ်းမှန်ကို ညွှန်တော်မူ၏။ ၎င်းပြင် ဧကန်မလွဲ သင်သည် ဖြောင့်မတ်သောတရားလမ်းကို အမှန်ပင် ညွှန်ပြလျက် ရှိ၏။
(ကုရ်အာန် ၄၂း ၅၂ )
မုဟမ္မဒ်သခင်ကား “နာမ်” ရေးရာ သူရိယနေမင်းကြီးတစ်ဆူ (သို့တည်းမဟုတ်) ကြယ်တာရာကြီး တစ်ဆူတည်း။ ယင်း၏အလင်းရောင်ဖြင့် လူသားတို့ကို လမ်းညွှန် တော်မူသည်။ ဤသို့ညွှန်ခြင်း မှာ ဘုရားတစ်ဆူအဖြစ်နှင့်ကားမဟုတ်ပြီ။ ဤသို့ မပြုရန် အလ္လာဟ်အရှင်ကပင် တားမြစ်ထားတော်မူသည်။ သူ၏ အလင်းရောင်ကား အလ္လာဟ်ရှင်၏ အလင်းရောင်သာ လျှင် ဖြစ် သည်။ သူ၏ လမ်းစဉ်မှာလည်း အလ္လာဟ်ရှင်၏ လမ်းစဉ်သာလျှင်ဖြစ်သည်။
တမန်တော်မြတ်အနေနှင့် ဤသို့အမြင်ကို ရသည်မှာ ဤတစ်ကြိမ်တည်းသာလော၊ မဟုတ်သေးပါ။ ထပ်ပြီး ရခဲ့ခြင်းရှိပါသေးသည်။ မည်သည့်နေရာတွင် ရခဲ့ခြင်းပါနည်း။ ကဏ္ဍ ၅၈ လာ အထက်တွင် ကိုးကားပြခဲ့သော ပါဒတော်များကိုကြည့်ပါ။ ပါဒအမှတ် ၁၂ တွင် ပညတ်တော်က အပြီးတိုင်သွားသည်။ သို့သော်ပါဒ အမှတ် ၁၃ မှ ၁၈ အထိတွင် မည်သို့ ဆက်ဆိုထားပါ သနည်း။ ဤအရည်ရွှမ်းသော အသီးဆိုသည်ကား အဘယ်နေရာတွင် ဖြစ်ပါသနည်း။ အရည်ရွှမ်းသော သီးပင်ကို အဘယ်အရာက လွှမ်းခြုံထားရစ်ပါသနည်း။ ပကတိစင်ကြယ်စွာ ဆင်ခြင်တွေး ဆမှုနှင့် ပကတိသန့်စင်သော နှလုံးသားနှင့်သာလျှင် စာရှုသူတို့အနေနှင့်လည်း ဤပုံဆောင်ချက်မျိုးကို နားလည်စွမ်းရာ၏။ မည်သည့် ဋီကာ ဖွင့်ချက်ကမျှ ရှင်းလင်းပြနိုင်ကောင်း မရှိရာပေ။ ဤအဝေးလှမ်းဆုံး အရည်ရွှမ်းပင်နှင့် ဥယျာဉ် စခန်းတစ်ခုဟူသည်ကား အလ္လာဟ်ရှင်၏ နှစ်မျို.တော်မူခြင်းဟူသော အသီးအပွင့်များသာလျှင် ဖြစ်သည်။ ယင်းကို သိသူတို့ကသာ ခံစားမိတက်ချေမည်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ကျိုးနွံနှိမ့်ချစွာ ဆိုရပါသော် အလ္လာဟ်ရှင်သာလျှင် ဤသည်တို့၏ သရုပ်မှန်ကို သိတော်မူချေမည်။
အရည်ရွှမ်းသီးပင်ကို မည်သူက လွှမ်းခြုံရစ်ပါသနည်း။
တူးရ်တောင်ပေါ်ဝယ် မည်သည်က ဖုံးလွှမ်းလာစဉ်တွင် မိုးကြိုးခသည့်ပမာ ဤတောင်ကြီးမှာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပဲ့ထွက်လွင့်စင်ခဲ့ရပါသနည်း။
ဤသည်ကား ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ပါစေဟူ၍သာ …
(ကုရ်အာန် ၅၃း ၁၇-၁၈)
မှတ်ချက်။ ဤတွင် ၁၉၉၃ ခုနှစ်ထုတ် ဆရာဝါးခယ်မ မောင်မင်းနိုင် ဘာသာပြန်ရေးသားသော Hafiz Ghulam Sarwar’s MUHAMMAD; THE HOLY PROPHET ကမ္ဘာ့စံပြတမန်တော် စာအုပ်၏ အခန်း ၈ စာမျက်နှာ ၁၁၅ မှ ၁၂၈ ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted in: အစ္စလာမ်ရေးရာ	Post navigation